စွဲလမ်းမှုအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging (2011)
Rita Z. Goldstein1 & Nora D. Volkow
သဘာဝတရားပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအာရုံကြောသိပ္ပံ 12, 652-669 (နိုဝင်ဘာလ 2011) | Doi: 10.1038 / nrn3119
စွဲလမ်းထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့၏ဆုံးရှုံးမှုစပိုင်းတွင် subcortical ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏နှောင့်အယှက်ကနေရလဒ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သို့သော်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံး limbic ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်၎င်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့်မြင့်မားစေရန်အတွက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို (ဥပမာ, Self-ထိန်းချုပ်မှု, salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများနှင့်အသိအမြင်) အတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကနေတဆင့် prefrontal cortex (PFC) ၏သော့ချက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် PFC များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးချဲ့သောအတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကောက်ယူအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအပေါ်အာရုံစိုက်။ စွဲလမ်းအတွက် PFC ၏နှောင့်အယှက် compulsive မူးယစ်ဆေးယူပြီးမသာအခြေခံဒါပေမယ့်လည်းစွဲနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အလိုတော်၏တိုက်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအားနည်းချက်များကိုအပြုအမူတွေကိုတွက်သည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (ပုံ။ 1) ကြားမှအလွန်အကျွံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ရလဒ်များကြောင့်မူးယစ်, Bing, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်တဏှာတစ် relapsing သံသရာလွှမ်းခြုံ။ လူသားမြားသဖွငျ့စော်ကားဖြစ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးကိုဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် dopamine တိုးမြှင့်နှင့်ဤသူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေခံယုံကြည်နေသည်။ ထို့ကြောင့်, စွဲအများစုလက်တွေ့လေ့လာမှုများသောသူတို့သည် (ထိုနျူကလိယ accumbens တည်ရှိရာ ventral striatum, နှင့် dorsal striatum) ပရောဂျက်ဖို့ midbrain dopamine ဒေသများ (ထို ventral tegmental ဧရိယာနှင့် substantia nigra) နှင့် Basal ganglia အဆောက်အဦများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ, အရာဆုလာဘ်, အေးစက်နဲ့အလေ့အထ formation1,2တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများကြသည်,3။ သို့သော် preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများထက်ပိုမကြာသေးမီကအလင်းမှယူဆောင်နှင့် addiction4 အတွက် prefrontal cortex (PFC) ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းဖို့စတင်ခဲ့ပါပြီ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူများ စုစည်း. - - နှင့်စွဲလမ်းအတွက် PFC ပြတ်တောက်အနုတ်လက္ခဏာအပြုအမူတစ်ခုကျယ်ပြန့် (စားပွဲတင် 1) ကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းရှင်းပြဖို့အကူအညီတောင်းဖြစ်စဉ်များ၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားကျန်းမာ neuropsychological function ကိုများအတွက်အခြေခံသော PFC မှ ascribed နေကြသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ PFC ဒေသ
self-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အမူအကျင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး: တုံ့ပြန်မှုတားစီး, အမူအကျင့်ညှိနှိုင်း, ပဋိပက္ခနှင့်အမှားခန့်မှန်း, detection နဲ့ resolution ကို Impulse, compulsive, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ချို့ယွင်း Self-monitoring (လေ့, အလိုအလျှောက်, နှိုးဆွ-မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်တရားရှိဖို့အပြုအမူပုံစံများ) DLPFC, dACC, IFG နှင့် vlPFC
စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း: စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖိနှိပ်မှု Enhanced စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်မှုနှိမ်နင်းရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (ဥပမာ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေ) mOFC, vmPFC နှင့် subgenual ACC
လှုံ့ဆော်မှု: ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏လိုက်စားဆီသို့ဦးတည် drive ကို, ပဏာမခြေလှမ်း, ဇွဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု မူးယစ်ဆေးဝါးများရယူဖို့စိတ်အားထက်သန် Enhanced ဒါပေမဲ့တခြားပနျးတိုငျမြားအတှကျလှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းသွားနှင့်ညှိရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု OFC, ACC, vmPFC နှင့် DLPFC
အသိအမြင်နှင့်ကြားဖြတ်ယူခြင်း - မိမိကိုယ်ပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌိအခြေအနေ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုခံစားခြင်း စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းစေခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းကိုငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုသမှုခံယူရန်နှင့်ပြင်ပမှစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း rACC နှင့် dACC, mPFC, OFC နှင့် vlPFC
အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: Set-ပြောင်းလဲနှင့်တာဝန် switching နှိုင်းယှဉ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသတ်မှတ်ထား အာရုံစူးစိုက်မှုမူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည်ဘက်လိုက်မှုနှင့်ကွာသည်အခြားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စစ်ကူအနေနှင့်မူးယစ်ဆေးရယူဖို့ရည်မှန်းချက်များအတွက်တရားရှိဖို့ DLPFC, ACC, IFG နှင့် vlPFC
အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်: ကိုယ်စားပြု၏ဆောက်လုပ်ရေးဖွင့်ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်လမ်းညွှန်မှု မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုဦးတည် biased နှင့်ဝေးအခြားနည်းလမ်းကနေကြောင်းမှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း DLPFC
သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်: လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု, တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှု, မျိုးသုဉ်း, ဆုလာဘ်တန်ဖိုး, ငုပ်လျှိုးနေတားစီး (အချက်အလက်များ၏ဖိနှိပ်မှု) နှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် မူးယစ်ဆေးအေးစက်နှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကို update လုပ်ဖို့နှောင့်အယှက်နိုင်စွမ်း DLPFC, OFC နှင့် ACC
ဆုံးဖြတ်ချက်ချ: အဘိုးပြတ် (စစ်ကူ coding) ရှေးခယျြမှု, မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်ကို, ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းချက်, စီမံကိန်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ဖွဲ့စည်းရေးနှိုင်းယှဉ် မူးယစ်ဆေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့မျှော်လင့်, နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်ကျော်ချက်ချင်းဆုလာဘ်၏ရွေးချယ်မှု, အနာဂတ်အကျိုးဆက်များ၏အထူးလျှော့စျေးနှင့်မတိဟောကိန်းများသို့မဟုတ်အရေးယူမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း lOFC, mOFC, vmPFC နှင့် DLPFC
Salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု: အကျိုးသက်ရောက်စေတန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်, မက်လုံးပေး salience နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ utility ကို (အခြားရွေးချယ်စရာရလဒ်များ) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးတွေကိုတစ်ဦးထိခိုက်တန်ဖိုးကိုရှိသည်, Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ devalued နှင့် gradients ရိပ်မိကြသည်မဟုတ်, နှင့်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှား (မျှော်မှန်းသည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားအမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံကို) mOFC နှင့် vmPFC
Orbitofrontal cortex (OFC) Brodmann ဧရိယာ (BA) 10-14 နှင့် 47 (Ref ပါဝင်သည်။ 216), နှင့် anterior cingulate cortex (ACC) ၏ယုတ်ညံ့ခြင်းနှင့် subgenual ဒေသများ (BA 24, 25 နှင့် 32) ကို ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) တွင်217; ACC အဆိုပါ medial PFC (mPFC) အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့ rostral ACC (rACC) နှင့် dorsal ACC (dACC) (အသီးသီး BA ဘွဲ့ 24 နှင့် 32,), ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ mPFC လည်း BA ဘွဲ့ 6, 8,9နှင့် 10 (Ref ပါဝင်သည်။ 218); dorsolateral PFC (DLPFC) BA ဘွဲ့ 6, 8,9နှင့် 46 (Ref ပါဝင်သည်။ 219); နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus (IFG) နှင့် PFC (vlPFC) BA ဘွဲ့ 8, 44 နှင့် 45 (Ref ၏ယုတ်ညံ့ဝေမျှပတ်ဝိုင်း ventrolateral ။ 220) ။ ဤရွေ့ကားအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တိုင်းဒေသကြီးတဏှာ, မူးယစ်, Bing နှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဒီဂရီမှပါဝင်ဆောင်ရွက်။ lOFC, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC; mOFC, medial OFC; PFC, prefrontal cortex ။
ပုံ 1 | မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ iRISA syndrome ရောဂါ၏အမူအကျင့်သရုပ်။
အဆိုပါချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့် salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု (iRISA) syndrome ရောဂါ၏အမူအကျင့်သရုပ်အဖြစ် - မူးယစ်စေခြင်း, Bing, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်တဏှာ - ဤကိန်းဂဏန်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏အဓိကလက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြသထားတယ်။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေး, အသုံးပြုမှုပမာဏနှင့်နှုန်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ variable ပေါ် မူတည်. မူးယစ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ Bingeing ဖြစ်စဉ်များထိုကဲ့သို့သောအက်ကွဲကိုကင်းကဲ့သို့အချို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု compulsive ဖြစ်လာ - မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပိုပြီးစားသုံးသည်နှင့်ရည်ရွယ်ထက်ပိုရှည်ကာလအဘို့ - လျှော့ချ Self-ထိန်းချုပ်မှုကိုညွှန်း။ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ, နီကိုတင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ) ပိုပြီးတပ်ရင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေလှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း, anhedonia, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုး။ အလွန်အကျွံတဏှာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးလိုသော, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် conditional တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ကတခြား, ပိုမိုအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များ, ထို့နောက်စွဲတစ်ဦးချင်းရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရန်လမ်းခင်းပေးနိုငျပါ (အခြေအနေတွင်စွဲ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများများအတွက်စားပွဲတင် 1 တွေ့မြင် iRISA နှင့်စွဲလမ်းအတွက် PFC ၏အခန်းကဏ္ဍကို) ၏။ ပုံ Ref ထံမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပြင်ဆင်ထား၏။7© (2002) American Psychiatric Association ။
စားပွဲတင် 1 | စွဲလမ်းအတွက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များ
သောရောဂါ - ပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ထွန်းသစ်စ preclinical studies5,6၏အခြေခံတွင်ကျနော်တို့ PFC ၏နှောင့်အယှက် function ကိုစွဲလမ်း (။ ပုံ 10) တွင်ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့် salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု (iRISA) ၏ syndrome ရောဂါမှဦးဆောင်ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1 အဆိုပြုထား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုမှအလွန်အကျွံ salience attributing ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူမှ sensitivity ကိုယုတ်လျော့ခြင်းနှင့် maladaptive သို့မဟုတ်မဲ့ဖြစ်စေသည် behaviours7 တားစီးဖို့စွမ်းရည်လျော့နည်းသွားသည်။ ဤအ core ကိုလိုငွေပြမှု၏ရလဒ်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးရှာကြံနှင့်တာအဓိကစိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုဖြစ်လာအခြား activities8 ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် drugs9 ရယူနိုင်ရန်အတွက်အစွန်းရောက်အပြုအမူအတွက်အထှတျအထိ။
ဤတွင်ကျွန်တော်စွဲလမ်းအတွက် PFC များ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကြီးမြတ်သောနားလည်မှုရဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ iRISA မော်ဒယ်သို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်, ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကနေစွဲလမ်းအတွက် PFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ အထူးသ, ဒီ putatively စွဲ၏ relapsing သံသရာအခြေခံသော neuropsychological ယန္တရားများအတွက် function သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော PFC အတွင်းကွဲပြားဒေသများ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ပထမဆုံးစနစ်တကျအကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) နှင့်စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီသော PFC ၏ဒေသများတွင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI (fMRI) လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤရွေ့ကား (; အဓိကကစာသားထဲမှာဆွေးနွေးကြသည်မဟုတ်ကြောင်း Brodmann ဒေသများများအတွက်နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်များ S1 (ဇယား) ကိုတွေ့မြင် Brodmann ဒေသများများအတွက်စားပွဲတင် 1 ကြည့်ပါ) orbitofrontal cortex (OFC), anterior cingulate cortex (ACC) တို့ပါဝင်သည်နှင့် prefrontal cortex (DLPFC) dorsolateral ။ ကျနော်တို့ PFC iRISA အတွက်ကစားသောအခန်းကဏ္ဍများဆက်စပ်တွင်ဤလေ့လာမှုများ (။ ပုံ 2) ၏ရလဒ်များကိုစဉ်းစားပါ: ပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖို့တုန့်ပြန်; ဒုတိယ, ထိုကဲ့သို့သောပိုက်ဆံအဖြစ် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်, ရန်တုံ့ပြန်; တတိယ, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင် Higher-အလို့ငှာအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်, နှင့်နာမကျန်း၏အသိအမြင်အတွက်စတုတ္ထ။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေးစွဲ (ပုံ။ 3) ၏ endophenotype အတွက်အမျိုးမျိုးသော PFC ငျဒသေ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်လမ်းပြကူညီပေးသည်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံကိုတင်ပြ။ အဆိုပါ PFC ၏အမှုဆောင် function ကိုသို့အကောင့်အသစ်များ၏စွဲဒါမှမဟုတ် In-depth ကိုပု PFC အပေါ် preclinical လေ့လာမှုများငါတို့သည်သည်အခြား reviews10, 11 မှစာဖတ်သူကိုရည်ညွှန်းသည်။
ပုံ2| မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် PFC လှုပ်ရှားမှု၏မကြာမီက neuroimaging လေ့လာမှုများ။
activation ၏ဒေသများ (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S1 (စားပွဲ)) (MRI, positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) သို့မဟုတ် Single-ဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography (SPECT) ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာ) stereotaxic အာကာသအတွင်းကြံစည်နေကြသည်, ထို dorsal နှင့် ventral မျက်နှာပြင်များပေါ်မှာပြန်ဆိုပြသ (ထိပ် လူ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်း) နှင့်အသီးသီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် medial မျက်နှာပြင်များ (အလယ်တန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အောက်ခြေအပိုင်း) ။ တစ်ဦး | Activity ကိုစွဲလမ်းအတွက် neuropsychological features တွေဆက်စပ်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ Prefrontal cortex (PFC) ဒေသများ (အဝါရောင်မှာပြသထားတဲ့) အာရုံစူးစိုက်မှုနှငျ့ပတျသကျသောတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားလှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် (အစိမ်းရောင်မှာပြသထားတဲ့) အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်, (အလင်းပြာပြာမှာပြသထားတဲ့) ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုကိုပြသ (အနီမှာပြ), နှင့် cue reactivity ကိုနှင့် (လိမ္မော်ရောင်နဲ့ပြသ) မူးယစ်အုပ်ချုပ်မှု။ ထို့အပြင်အချို့ PFC အတွက်ဒေသများလှုပ်ရှားမှု (နက်ပြာရောင်မှာပြသထားတဲ့) တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ခ | Activity ကို (အနီမှာပြသ; မူးယစ်ဆေးဝါးများလေ့လာမှု 48 နာရီအတွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်) မူးယစ်နှင့် bingeing အပါအဝင်စွဲအတွက်လက်တွေ့ features တွေနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများ, (ပန်းရောင်မှာပြထားတဲ့; မူးယစ်ဆေးဝါးများလေ့လာမှုမပြုမီ 1-2 ရက်သတ္တပတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်) စွဲလမ်းနှင့်ဆုတ်ခွာ (ပြသ ခရမ်းရောင်ပြခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ) ကျော်ကို3ရက်သတ္တပတ်လေ့လာမှုမပြုမီအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စွဲလမ်း၏စင်မြင့်မသတ်မှတ်ရသေးသို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်အတွက်လေ့လာမှုများအတွက် activation ပြဒေသများတွင်လည်း (အညိုမှာပြသထားတဲ့) ညွှန်ပြနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ဦးတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်သူတို့အားကဲ့သို့တူညီသောလေ့လာမှုများဖြစ်ကြသည်။ လေ့လာရေးက x, y နှင့် z ကိုသြဒီနိတ်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်သာလြှငျပါဝင်သည်နှင့်ဤသြဒီနိတ် PFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စအတွင်းဖြစ်လျှင်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, x သောလေ့လာမှုများ, y နှင့် z ကိုသြဒီနိတ်တည်ရှိသောမရနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာအမည်တပ်ထားသောခဲ့ကြသည်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးက x, y နှင့် z ကိုသြဒီနိတ်ကြံစည်မတိုင်မီ (GingerAle, Meta-အားသုံးသပ်ခြင်းများအတွက် Cross-platform ကိုဂျာဗားလျှောက်လွှာကိုသုံးပြီး) Talairach အာကာသကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Multi-Level Kernel Density အားသုံးသပ်ခြင်း toolbox213, 214 (ကော်လိုရာဒို CANLab software ကို web site ကိုတက္ကသိုလ်ကြည့်ရှုတော်မူကိုလည်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်များ S8 (ပုံ) တွင်ကြည့်ပါ) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပုံ3| စွဲလမ်းအတွက် iRISA အတွက် PFC ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။
prefrontal cortex (PFC) မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအကြားအပြန်အလှန်သိမြင်မှုထိန်းညှိခြင်းငှါမည်သို့တစ်ဦးကမော်ဒယ်စွဲထဲမှာစိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ကျန်းမာ, Non-စွဲတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ပြည်နယ်များအတွက် PFC လှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ - မူးယစ်စေခြင်းနှင့် Bing နှင့်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်တဏှာ - မော်ဒယ်စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် PFC ငျဒသေ၏လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲမှုများစွဲ၏အမာခံလက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ပုံကိုပြသသည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်အထူးသဖြင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းအပေါ်အာရုံစိုက်။ Oval အပြာရောင်များသည် dorsal PFC ခွဲများကို (dorsolateral PFC (DLPFC)၊ dorsal anterior cingulate cortex (dACC) နှင့်ယုတ်ညံ့ frontal gyrus အပါအဝင်၊ ဇယား ၁ တွင်ကြည့်ပါ) အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှု ('အအေး' လုပ်ငန်းစဉ်) တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ovals များသည်အနီရောင် ventral PFC subregions (medial orbitofrontal cortex (mOFC), ventromedial PFC နှင့် rostroventral ACC) ကိုပိုမိုအလိုအလျောက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ('ပူသော' လုပ်ငန်းစဉ်များ) တွင်ပါဝင်သည်။ ဤအငျဒသေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်မူးယစ်ဆေး-related neuropsychological လုပ်ဆောင်ချက်များကို (ဥပမာ, မက်လုံးပေး salience, မူးယစ်ဆေးလိုသော, အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်) မှောင်ရိပ်များနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာ (ဥပမာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု) ကကိုယ်စားပြုနေကြသည်ပေါ့ပါးရိပ်ကကိုယ်စားပြုနေကြသည် ။ တစ်ဦး | ကျန်းမာပြည်နယ်များတွင် Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင် functions များ, စိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူ (ကြီးများအလင်း-အရောင်ဘဲဥပုံအားဖြင့်ပြသ) ကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်နဲ့ automatic တုံ့ပြန်မှု (မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အရေးယူသဘောထားတွေ) ကို dorsal PFC (ဆီက input အားဖြင့်နှိမ်နင်းလျက်ရှိသည် ) အထူမြှားခြင်းဖြင့်ပြသ။ ထို့ကြောင့်ကျန်းမာသောပြည်နယ်ရှိလူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ပါကအလွန်အကျွံသို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုတားဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ခြင်း ('Stop!') ဖြစ်သည်။ ခ | တပ်မက်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြုအမူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မသက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများကို စတင်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပaိပက္ခဖြစ်စေသည် ('Stop?) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားနှင့် / သို့မဟုတ်တန်ဖိုး (သေးငယ် Light-shaded ဘဲဥပုံအားဖြင့်ပြသ) Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုဖို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်, ဤလျော့ချရေးလျှော့ Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့် anhedonia, စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မူးယစ်ဆေး-biased သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလိုသောအတွက် (ထိုပိုကြီးတဲ့မှောင်မိုက်-shaded ဘဲဥပုံအားဖြင့်ပြသ) တစ်ခုတိုးလည်းရှိပါသည်။ ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးရူးနေစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သော 'ပူသော' လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကြီးကြပ်သောဒေသများမှ (အမြှေးကြီးဖြင့်ပြသထားသည့်) ပိုမိုမြင့်မားသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မဆိုင်သောသိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်မှုများကို (အပြာရောင်ဘဲဥပုံငယ်ဖြင့်ပြသည်) ကိုဖိနှိပ်သည် မှောင်မိုက်အနီရောင်ဘဲဥပုံ) ။ ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်သောနေရာများမှ (input ကျဆင်းနေသောမြှားဖြင့်ပြထားသော) မှသွင်းအားစုများလျော့နည်းလာပြီး 'ပူသော' ဒေသများသည်အဆင့်မြင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာ input ကိုလွှမ်းမိုးလာသည်။ ထို့ကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါငျးတို့သညျအခွားစစ်ကူကျော်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကျဉ်းမြောင်း, Impulse တိုးနှင့်အခြေခံစိတ်ခံစားမှု - ထိုသို့သောကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အမျက်သို့မဟုတ်မေတ္တာအဖြစ် - ဆက်စပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဓာတ်ပေါ်မူတည်ပြီးလွှတ်နေကြသည်။ ရလဒ်မှာအလိုအလျောက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်လှုံ့ဆော်မှုပြုသည့်အပြုအမူများဖြစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်စာဖတ်သူများသည်များပြားလှသည့်ရလဒ်များကိုလက်ခံရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်တိကျသောကောက်ချက်များအမြဲတမ်းပေးလေ့မရှိသောကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနေရာချခြင်းအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် dorsal ACC နှင့် DLPFC တို့သည်တပ်မက်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုတွင် (သို့) တုန်လှုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ neuroanatomical နှင့်သိမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကြောင့်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ မည်သည့် PFC subregion သည်မည်သည့် function ကိုဖျန်ဖြေပေးသည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်၊ neuropsychological လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါပါ ၀ င်သူများသည်နည်းဗျူဟာမြောက်များစွာကိုသုံးနိုင်သည်၊ ပိုပြီးမူလတန်း sensorimotor စနစ်များ။ နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်ကြာသုတေသနပြုမှုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင် PFC ၏အခန်းကဏ္ofကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၌တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်သည်။ preclinical ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်ဆေးဝါးဗေဒလေ့လာမှုများမှရလဒ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ စွဲခြင်းတွင်အခြားသော cortical နှင့် subcortical တည်ဆောက်ပုံများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း - PFC သည်အခြား ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်သိပ်သည်းဆအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသည် (အစောပိုင်းလေ့လာမှုများ၏ဆွေးနွေးမှုအတွက်ဤကွန်ယက်များကိုစွဲလမ်းမှုအခြေအနေကိုဆန်းစစ်ရန်အတွက် Box 1 ကိုကြည့်ပါ) မော်ဒယ်လ်သည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို PFC ဒေသများရွေးချယ်ရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ဤ ဦး တည်ချက်အတွက်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထောင့်ကွက် 1 | PFC ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထဲမှာစွဲ-related အပြောင်းအလဲများ
prefrontal cortex (PFC) သည်အခြား cortical နှင့် subcortical ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်ကွန်ယက်များဖြစ်သော 'default mode network' (DMN) နှင့် 'အာရုံစူးစိုက်မှုအာရုံစူးစိုက်မှုကွန်ယက်များ' တို့ကဲ့သို့သိပ်သည်းစွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်။43, 155, 156။ နှင့်အခြားအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများ - - ဘယ်လိုသောဤကွန်ရက်များ၏မေးခွန်းကိုပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသာမကြာသေးမီကစူးစမ်းခံရဖို့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်, ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလေ့လာမှုများပြီးသားရောဂါပြင်းထန်မှုနှင့်ကုသမှုရလဒ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းပုံစံများထုတ်ဖော်အတွက်ဂတိတော်ကိုပြကြပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်, dorsal anterior cingulate cortex (dACC) တွင် -striatal ဆက်သွယ်မှုပြောင်းပြန်နီကိုတင်းစွဲလမ်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းလျက်ရှိ၏ တစ်ဦးနီကိုတင်း patch ကိုသုံးပြီးသိသိသာသာတိုကျရိုကျ midline အဆောက်အဦမှသူတို့အားအပါအဝင်အများအပြား ACC ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၏ကွက်တိဝင်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်157။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, abstinent ဆေးလိပ်သောက်, ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတိုးတက်မှုအတွက်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးဟာ DMN အတွင်းပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့်၎င်း, အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြားပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့်တကွ, အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကိုနှင့် DMN အကြားတစ်ဦးတိုးလာပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ပြီးနောက် ဆုလာဘ််ပတ်သက်နေ158။ နီကိုတင်းစွဲလမ်းသို့ပိုများသောမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများဆက်သွယ်မှုမီးခိုးရောင်ကိစ္စသမာဓိရှိနှင့် cue reactivity ကိုနှင့် ပတ်သက်. စူးစမ်းသောအရေးပါသော Multi-ပုံရိပ်ချဉ်းကပ်မှုအဆင်ပြေအောင်159, 160.
network-တိကျတဲ့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိလည်းအခြားအစှဲအတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ ကိုကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီမှာ rostroventral ACC (ထို DMN ၏အစိတ်အပိုင်း) dopamine အာရုံခံတည်ရှိသည်ရှိရာ midbrain နှင့်အတူနိမ့်ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့တယ်161နှင့်အလားတူရလာဒ်များကိုအခြားလေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့ကြ162။ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်လျှော့ချလည်းဘိန်းဖြူစွဲအစီရင်ခံခဲ့ကြ163, အဘယ်သူကိုအတွက်ဆက်သွယ်မှုမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုအားဖြင့် modulated ခဲ့သည်164 နှင့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုပိုရှည်ကြာချိန်နှင့်ဆက်စပ်165။ အနားယူခြင်း - ပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုသည်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောဆေးဝါးများသည်ဤအစီအမံများကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်မှုသည်အနားယူခြင်း - ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမြှင့်တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ အခြေခံပြည်နယ်လျှော့တာဝန် - သွေးဆောင် activations နှင့်ဆက်စပ်? ဤမေးခွန်းများသည်အရေးကြီးသည်။ အဖြေများကတစ် ဦး ချင်းစီအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောလက်တွေ့အဆုံးများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်း၏အခြေခံကျသောအနားယူနိုင်သည့်အလုပ်လုပ်သည့်ဆက်သွယ်မှုပေါ် မူတည်၍ ဆေးသောက်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (20% အရှုံးအထိ) စွဲလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးလျှော့ချ PFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်အထူပြသခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အထူး dorsolateral PFC (DLPFC) တွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ PFC လျှော့, အရက်စွဲကြသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားလျှော့မဟုတ်တော့တစ်သက်တာအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေကြ166, 167 နှင့်ပိုဆိုးအလုပ်အမှုဆောင် function ကို167နှင့် abstinence ၏6နှစ်သို့မဟုတ်ကပိုတက် 9-6 လမှဆက်လက်ရှိ168, 169, 170။ အချို့ကွဲလွဲရလဒ်များကိုနေသော်လည်း171, တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အများဆုံးလေ့လာမှုများကိုကင်းစွဲကြသူ172, 173, 174, စိတ်ကြွဆေး175, ဘိန်းဖြူ176 (အချိန်မှာတောင် methadone အစားထိုးကုထုံးအပေါ်177, 178) နှင့်နီကိုတင်း159, 160, 179, 180 အဆိုပါ DLPFC, ACC နှင့် orbitofrontal cortex (OFC) တွင်အများဆုံးထင်ရှားနေသော - - ရှည်ကြာချိန်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တိုးလာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်လျက်ရှိသောအလားတူ PFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျှော့ချသတင်းပို့ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အဆုံးကိုကျော်လွန်သည်ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်ရေရှည် abstinence သို့ဇွဲ (ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီ predispose အံ့သောငှါ Pre-နေကြလို့ပဲသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်အချက်များတစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြံပြုထောင့်ကွက် 3) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူမမှန်အရက်၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုသူများအတွင်တွေ့မြင်ကြသည်မဟုတ်181 သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်182ဤ PFC လျှော့လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ဦးထိုး-မှီခိုအကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုသည်။ ကစွဲလမ်းဖို့ predisposes သို့မဟုတ်စွဲလမ်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အထူးသဖြင့် medial OFC ထိုသို့သောအောက်ပိုင်း PFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်, အားနည်းမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ဆက်စပ်နေသည်183 ကြောင်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီ၏ဘဝအတွက်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် PFC လှုပ်ရှားမှုအပေါ် Non-လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S2 (စားပွဲ)) ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ကြောင်းလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ OFC အတွက် (ဥပမာ, တဏှာအတွက် OFC (mOFC) နှင့် ventromedial PFC medial စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု, အော်တိုအပြုအမူတွေနှင့်အဆင့်မြင့်ယူမှုကိုအလုပ်အမှုဆောင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပါအဝင် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြမူးယစ်ဆေး-related လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု PFC ဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှု၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ခန့်မှန်း မူးယစ်ဆေးမျှော်လင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related အလုပ်လုပ်အမှတ်တရများဖွဲ့စည်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် DLPFC အတွက် ACC) ။ ဒါဟာအစအရှိဆုံးအထူးသ (ပုံ။ 3) အောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တဏှာနှင့် Bing စဉ်အတွင်းဤတူညီသော PFC ဒေသများတွင် related Non-မူးယစ်ဆေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ယခင်ခန့်မှန်း, သွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီနေ့ချင်းညချင်း-abstinent ကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီမြင့်တဏှာ၏ Self-အစီရင်ခံစာများတိုးလာနှင့်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသော PFC subregions12, 13 အတွက် fMRI အသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားလာရန်။ subcortical ဒေသများတွင်ကင်း၏ pharmacological သက်ရောက်မှုမှအဓိကအားဖြင့်တုန့်ပြန်သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာဘယ်ဘက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC အတွက်လှုပ်ရှားမှု, frontopolar cortex နဲ့ ACC မူးယစ်ဆေးမျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် modulated ခဲ့သည် ((ကိုကင်းများမမျှော်လင့်ဘဲသွေးကြောသွင်းပေးပို့နှိုင်းယှဉ်မျှော်လင့်ထားပြီးနောက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, လှုပ်ရှားမှုကြီး) ထိုဖြစ်ပါသည်, မြျှောလငျ့ခွငျးအားဖွငျ့အဘယ်သူမျှမမော်ဂျူ) ရှိ၏ အကျိုးစီးပွား (Roi) 13 ၏ဒေသအားဖြင့်ကွဲပြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏တိကျညှနျကွားခ။ တစ်ဦး 18Fluorodyoxyglucose ပေ (ပေ FDG) လေ့လာမှုများတွင်တက်ကြွစွာကင်းအသုံးပြုသူများအဖို့လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေး methylphenidate (MPH) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဦးနှောက်ဂလူးကို့စ metabolism14 တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာဘယ်ဘက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC မျှော်လင့်ထား MPH ဖို့ထက်မျှော်လင့်မထားတဲ့တုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ်ဇီဝြဖစ်ပြသ; အထက်ပါ study13 အတွက် BOLD အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ရန်ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံဖြစ်နိုင်သည်ပုံရိပ်ပုံစံများ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ၏ကွဲပြားခြားနားသောယာယီ sensitivity ကိုထင်ဟပ်။
လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် PFC လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်။ ဥပမာအားဖြင့်, မူးယစ်ဆေး-နုံမျောက်တွေကိုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု (rCBF) cocaine15, 16 ၏ရိုးရှင်း fixed-rate ကို Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း Non-ဆက်ပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးနှင့် ACC အတွက် DLPFC အတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးကပေ FDG လေ့လာမှုအတူတူတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ် access ကို limited17 (access ကိုတိုးချဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်မဟုတ်ဘဲကန့်သတ်သို့မဟုတ်အတိုကောက်လက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်အခါကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ထက်တိုးချဲ့အခါကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိ OFC နှင့် ACC အတွက်ဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသအတွက် addiction18 ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကဲ့သို့), အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်။ အလားတူပင်ကြွက်များတွင်ကင်း၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး PFC19 အပါအဝင်ရွေးချယ်ထားသည့်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ကြီးမားတဲ့ fMRI တုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်။
လတ်တလောလေ့လာမှုမှာ, ကိုကင်းဟာ Macaque monkeys20 အတွက် PFC နှောက်အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချပေမယ့် (အတူတကွခေါ်ဆောင်သွားသည် PFC အပေါ်ကိုကင်းများ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (နှင့်ထိုကဲ့သို့သော MPH ကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ကြွဆေး) ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, PFC လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါသည်, CBF သို့မဟုတ် BOLD ) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမျှော်လင့် Module PFC လှုပ်ရှားမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်၏အရှည်နှင့်အမျှမူးယစ်အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးပုံမှန်အသုံးပြုမှုမှပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါသုံးစွဲခြင်းကနေအကူးအပြောင်းအတွက်တရပ်ပေါ်ပေါက်လာသော neuroplastic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းမူးယစ်ဆေး-related neuropsychological မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်မျှော်လင့် (နှင့်အခြားအခြေအနေများတုံ့ပြန်မှု) အပါအဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များ, ဖိနှိပ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော၏မျှော်လင့်အဖြစ် Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ, မှေးမှိန် - သို့မဟုတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှု - Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောရည်မှန်းချက်များ (။ ပုံ 3) မှီအောင်လိုက်လော့။
အဆိုပါ day21 ၏ပထမဦးဆုံးစီးကရက်ဆေးလိပ်အပြီးစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်, rCBF လက်ဝဲ dorsal ACC (dACC) တွင်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်နှင့်ဤတဏှာအတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း။ အလားတူဆက်စပ်မှုဘိန်းဖြူ-dependent22 နေသောလူဘိန်းဖြူ၏စူးရှသောဆေးထိုးပြီးနောက် OFC နှင့်တဏှာအတွက် rCBF အကြားသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ PFC လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း (နှင့်အခြားစိတ်ကြွဆေး) ၏သက်ရောက်မှုများအကြားကွာဟမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုပစ်မှတ်နေသော PFC နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများ (cannabinoid, mu opioid နှင့်နီကိုတင်း receptors ပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏တိုက်ရိုက် pharmacological ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ဆေးခြောက်, ဘိန်းဖြူနဲ့နီကိုတင်းအဘို့, အသီးသီးကွဲပြားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဖြန့်ဖြူးထားသော) သို့မဟုတ် Non-CNS ပစ်မှတ် (ကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးဆေးခြောက်သို့မဟုတ်အရက်၏အရံသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းရံ sympathomimetic သက်ရောက်မှုရှိသည်) ရက်နေ့တွင်, သို့မဟုတ်ပါကအတိုင်းအတာများအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ (လေ့လာမှုများအကြွင်းမဲ့အာဏာသို့မဟုတ်ဆွေမျိုး (သို့မဟုတ်ပုံမှန်) တန်ဖိုးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှိမရှိဥပမာအားဖြင့်,) အချက်များ 23 ။ ဒါဟာအစမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်တဏှာသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ: ကိုကင်းများကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စွဲလမ်းချက်ချင်းနီကိုတင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်တဏှာအစီရင်ခံလျှောက်လျော့နည်းအထက်တွင်ဆွေးနွေးလေ့လာမှုများသော်လည်း, ဆေးလိပ်ပြီးနောက် 10-15 မိနစ်တိုးပွားစေပါသည်။ ဒီအလငျး၌ Viewed, ငါတို့မော်ဒယ်နှင့်အတူတသမတ်တည်း, စုပေါင်းရလဒ်များကိုမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုတဏှာလျော့ကျအခါ, ဒီမူးယစ်ဆေး-related PFC လှုပ်ရှားမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်အပြန်အလှန်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အကယ်စင်စစ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အမှုကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့ Concomitantly သည်ဤမူးယစ်ဆေး-related လျှောက်လျော့နည်းအတူငါတို့သည်တိုးမြှင့်ဖို့ Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သော PFC လှုပ်ရှားမှုမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။
ဤအပိုင်းကိုအတွင်းရလဒ်များကိုအကြားညီမျှမှု, ဤဆန်းစစ်ခြင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောပုံရိပ်ပုံစံများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမှစွပ်စွဲနိုင် - ဤကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်အစောပိုင်းအပေါ်အသိအမှတ်ပြုခံရသင့်ကြောင်းပြဿနာ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂလူးကို့စဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှု fMRI BOLD နှင့်ပေ CBF သော်လည်း, 30 မိကျော်ပျမ်းမျှပေ FDG အစီအမံ activation ပုံစံများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအပြောင်းအလဲရောင်ပြန်ဟပ်။ ဤရွေ့ကားပုံစံများလည်းသူတို့ရဲ့အခြေခံဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ကွာခြား: ကပေနှင့်သွေးလွှတ်ကြောလှည့်ဖျားတံဆိပ်ကပ် MRI နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သော်လည်းက BOLD fMRI နှင့်အတူပကတိအခြေခံတည်ထောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ လေ့လာမှုများအကြားနောက်ထပ်ဘုံခြားနားချက်တစ်ဦးချင်း၏အခြေခံပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်, ဥပမာ, abstinence များ၏ကြာချိန်တဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာ၏အစီအမံ impact နိုင်ဘူး။
ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုကြသည်တ္ထု, အတိတ်တွင်လည်းကောင်းစိတ်သက်သာရာသို့မဟုတ်အစပျိုးခဲ့ကြသည်သောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များရယူဖို့သူတွေကိုအဖြစ် - မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အဓိကမှာလေ့အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးသောမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်နွယ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့အေးစက်တုံ့ပြန်မှုများမှာ ထို့နောက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေနှင့်ပြန်သွားကြသည်ရန်အရေးကြီးပါသည်မျှဝေသူဖြစ်ကြ၏ဆန္ဒမောင်းထုတ်ကြောင်း - မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ imaging လေ့လာမှုများဥပမာ, သူတို့ကိုမူးယစ်ဆေး-related ဓာတ်ပုံများကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုစွဲလူတွေကိုဖော်ထုတ်ဤအေးစက်တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ပါပြီ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S3 (စားပွဲ)) စွဲတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ထိတွေ့မှု Cue ဖို့ PFC တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းပထမဦးစွာပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများ, ပြီးတော့ကျနော်တို့မူးယစ်ရန် PFC တုံ့ပြန်မှုအပေါ် abstinence, မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုကြားဝင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစူးစမ်းကြောင်းလေ့လာမှုများဆွေးနွေးရန် (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S4 (စားပွဲ)) တွေကို -related ။ ကျနော်တို့စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုမှ PFC တုံ့ပြန်မှုအေးစက်ရှိနေသော်ငြားလည်း, မူးယစ်ဆေးကိုယ်တိုင်ကဖို့တုံ့ပြန်မှုတူတဲ့နှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဟာ PFC အတွက်မူးယစ်ဆေး-cue အေးစက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလျှော့ချရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း။
PFC လှုပ်ရှားမှုအပေါ် cue ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အချို့သော exceptions24, 25, 26 ရှိပါတယ်ပေမယ့်, fMRI လေ့လာမှုများပြုလုပ်သတင်းပို့ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်, မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတစ်ဦးချင်းစီတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆွေမျိုးမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမှ PFC အတွက်တိုးမြှင့် BOLD တုံ့ပြန်မှု (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S3 (စားပွဲ)) ပြသပါ။ ဤရလဒ်သည်ငယ်ရွယ်စီးကရက် smokers34 ၌၎င်း, နှစ်နိုင်ငံ DLPFC နှင့် ACC အတွက်ရေတို term27 နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ term28 abstinent အရက်သမားအတွက် medial တိုကျရိုကျ gyrus နှင့်ညာဘက် subcallosal gyrus (Brodmann ဧရိယာ 29) left, ဘယ်ဘက် DLPFC အစီရင်ခံခဲ့သည်။ တစ်ဦး cigarette30 ကိုင်တွယ်နေချိန်တွင်အလားတူတိုးစီးကရက်-related ဗီဒီယိုကြည့်ကင်း-related videos31 စောင့်ကြည့်ကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်၏ (PET FDG လေ့လာမှုများအပါအဝင်) လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့သည်။ မကြာခဏဆိုသလိုမူးယစ်ဆေး-related cues29, neuroimaging အစီအမံအုပ်စုတစ်စုကို detect အတွက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသော valence သို့မဟုတ် arousal ratings အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ, အရေပြား conduction တုံ့ပြန်မှု) တွင်စွဲနှင့် Non-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ် မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမှ conditional တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အရေးကြီးတာက, cue-သွေးဆောင် PFC တုံ့ပြန်မှု craving31 နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး use27 ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်, ဤအစီအမံလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိသည်ညွှန်း, တစ်ဦး Prime စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသိအမှတ်ပြုမှု task32 နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း3လအတွင်း later29 အပေါ်နှစ်ဦးစလုံးနောက်ဆက်တွဲစွမ်းဆောင်ရည်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ PFC activation (subcortical ဒေသများ instead33 activated) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်မျက်နှာဖုံး cues34 အားဖြင့်ရူးနှမ်းခဲ့သည်နှင့်အမျှမူးယစ်-related တွေကိုသတိရှိရှိရိပ်မိကြသောအခါ, ဤဆိုးကျိုးများသာသွေးဆောင်စေခြင်းငှါ, သို့သော်ဤထပ်မံလေ့လာခဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လိုင်းစူးရှ pharmacological မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကာလအတွင်း cue-related PFC activation စူးစမ်း။ မူးယစ်ဆက်စပ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနေစဉ်ဘိန်းဖြူထိုးလက်ခံရရှိဘိန်းဖြူ-မှီခိုယောက်ျားအတွက်, OFC အတွက် CBF မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့အတွက်တိုက်တွန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် DLPFC အတွက် CBF (Brodmann ဧရိယာ 9) happiness22 (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S2 (စားပွဲ)) ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့် (litchi သီးဖျော်ရည်ကိုနှိုင်းယှဉ်) အရက်၏မျှသာအရသာငယ်ရွယ်သောက်အတွက် BOLD PFC လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်, ဤတုံ့ပြန်မှုအရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် craving35 နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် subcortical ဆုလာဘ် circuit36 အတွက် dopamine neurotransmission မောင်းနှင်ကြောင်းသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် non-မှီခိုအရက်သေစာသောက်သို့မဟုတ်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်, cue-ဆက်စပ် OFC လှုပ်ရှားမှုအရက်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေး, respectively37 လျှော့ချခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် Non-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်သွေးကြောသွင်း MPH အုပ်ချုပ်ရေး ventral PFC regions38 (Box ကို 2) တွင်ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူပဲ့တင်ထပ်နေ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက် Non-မှီခိုနှင့်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမှ PFC တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အားဖြင့်ထပ်မံ cue-related PFC တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မူးယစ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်များအလွဲသုံးစားလုပ်မူးယစ်ဆေးအတွက် bingeing ၏ modeling cue-သွေးဆောင် compulsive အပြုအမူတွေကိုလျှော့ချရန်ကြားဝင်၏ဒီဇိုင်းများအတွက်သိကောင်းစရာများပါလိမ့်မယ်။
ထောင့်ကွက်2| dopamine နှင့်အခြား neurotransmitters ၏အခန်းကဏ္ဍကို
ထူထပ်ဆုံးဖြစ်သည့် midbrain နှင့် dorsal နှင့် ventral striatum အဖြစ် subcortical ဒေသများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့ Dopamine D2 receptors, ကိုလည်း prefrontal cortex (PFC) တစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ဝေနေကြသည်။ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ၏တစ်ဦးကစီးရီးလေ့လာမှုများစိတ်ကြွဆေးစွဲကြသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အနိမ့် striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်184, ကိုကင်း38 သို့မဟုတ်အရက်185နှင့်နေကြလို့ပဲအဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူလူအတွက်186, ဤလျှော့ချနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ orbitofrontal cortex (OFC) နှင့် anterior cingulate cortex (ACC) တွင်အခြေခံဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းအတွက်ပိုက်ဆံမှ medial PFC တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကွောငျးဖေါ်ပြခြင်းပဏာမဒေတာများကထောက်ခံကြောင်းစိတ်ကူးတစ်ခု - ဒီ D2 receptors မှတစ်ဆင့်အချက်ပြ dopamine ဆုံးရှုံးစွဲတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ကြောင်း prefrontal function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှု၏အချို့သောအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြု -addicted တစ်ဦးချင်းစီ187။ လျှော့ချ striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုမှာလည်းပုံမှန်အတိုင်းဆေးလိပ်ပြီးနောက်နှင့် abstinence ၏ 24 နာရီနောက်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံး, အထီးမိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်အစီရင်ခံခဲ့သည်; အဆိုပါ sated ခွအေနအေထဲမှာ, dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှစ်နိုင်ငံ ACC အနုတ်လက္ခဏာ (အပြုသဘောဆက်စပ်မှုဟာ striatum နှင့် OFC များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်) ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ပါတယ်အတွက်188။ အဆိုပါ dorsolateral PFC (DLPFC) တွင် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေဘို့သက်သေအထောက်အထားလည်းငယ်ရွယ်နာတာရှည်အစီရင်ခံခဲ့သည် ketamine သုံးစွဲသူများနှင့်ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အဆင့်ဆင့်မြင့်မားတဲ့အပတ်စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်189။ မြင့်မားတဲ့ feeling ၏ Self-အစီရင်ခံအတွေ့အကြုံများကိုအတွက်အပြိုင်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူကင်းချိုးဖောက်မှုများနှင့်အရက်သမားအတွက် (ဥပမာ, methylphenidate) တစ်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါး၏သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်သိသိသာသာ attenuation striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်အစီရင်ခံသည်အခြားပေလေ့လာမှုများ38, 185.
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, စွဲတစ်ဦးချင်းစီတွင်ဤရလဒ်များကိုတုံး striatal dopaminergic function ကိုထောက်ပြ - အခြေခံမှာတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန်နှစ်ဦးစလုံး - အသုံးပြုမှုတိုးမြှင်တဏှာနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ကြောင်း။ တုံး striatal dopamine တုံ့ပြန်မှုကပြန်သွားကြသည်မှဘာသာရပ်များ predispose စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, abstinent ကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုက်ဆံကျော်ကင်းများအတွက်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်190။ ရလဒ်ကိုလည်း striatum အတွက် dopamine တိုး၏ပြင်းအားကိုထိန်းညှိအသုံးပြုပုံကြောင်းအကြံပြု185အဆိုပါ OFC စစ်ကူ၏တန်ဖိုးများ၏မော်ဂျူအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍယူဆ; ဒီစည်းမျဉ်းများပြတ်တောက်စွဲဘာသာရပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်မှစွပ်စွဲတိုးမြှင့တန်ဖိုးကိုအခြေခံလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့ပါတယ်သော်လည်းဒီအကြံပြုချက်နှင့်အတူတသမတ်တည်း, ကိုကင်းချိုးဖောက်သည့် medial OFC နှင့် ventral ACC အတွက်ဇီဝြဖစ်, သွေးကြောသွင်းလှုံ့ဆော်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးတိုးတက်သဖြင့်, လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာဇီဝဖြစ်စဉ်တိုးမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်38.
Endogenous opioids ကိုလည်းအလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး, အထူးသဖြင့်ဘိန်းဖြူ, အရက်နှင့်နီကိုတင်း၏အကြိုးတုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု endogenous opioids ၏လျော့နည်းသွားလွှတ်ပေးရန်, dysphoria အပါအဝင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေမှအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သုံးပြီးလေ့လာမှုတစ်ခု [11ကို C] carfentanil ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများကျန်းမာ Non-စွဲထိန်းချုပ်မှုထက် (အောက်ပိုင်း endogenous opioid အဆင့်ဆင့်၏ညွှန်ပြ) မြင့်မားတဲ့ PFC mu opiate အဲဒီ receptor binding အလားအလာရှိခဲ့, ဤ abstinence ၏ 12 ရက်သတ္တပတ်တစ်လျှောက်လုံး anterior တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ ACC အတွက်တည်မြဲမှုကြောင်းကိုပြသ191။ ကုသမှု သာ. ကွီးမွတျကိုကင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် abstinence ၏တိုတောင်းတဲ့ကြာချိန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နှင့်အခြေခံမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းထက်ကုသမှုရလဒ်ကို၏ပိုကောင်းတဲ့ခန့်မှန်းဖြစ်ဖို့အကြံပြုခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထို DLPFC နှင့် ACC အတွက် binding ခြီးမွှောကျ mu opiate အဲဒီ receptor192။ အလားတူရလာဒ်များ abstinent အရက်သမားယောက်ျားအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်193, mu (သို့မဟုတ် Kappa) ၏အဆင့်ကိုသော်လည်း opiate အဲဒီ receptor binding ဘိန်းဖြူ-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်နာတာရှည် methadone အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်194.
ယုတ်လျော့နေတဲ့ serotonin Transporter radioligand များအတွက် PFC binding အလားအလာ abstinent စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများအစီရင်ခံထားသည်195လူငယ်အပန်းဖြေ MDMA အသုံးပြုသူများသည်196 နှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်အရက်သမားအတွက်197။ လျှော့ချ serotonin Transporter ရရှိမှုတိုးလာ Synaptic serotonin မှ neuroadaptations ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လည်း serotonergic အာရုံကြောဆိပ်ကမ်းပျက်စီးမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါ PFC ထိန်းညှိခြင်းနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်သော neuroadaptations အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်အခြား neurotransmitter စနစ်များအချိုမှုတို့ပါဝင်သည်198 နှင့် cannabinoid199, 200 စနစ်များကို။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိလူ့စွဲထဲမှာပုံရိပ်မှ radiotracers သည်ဤစနစ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမထုတ်ဝေလေ့လာမှုများရှိပါသည်။
မြင် နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S7 (ဇယား) စွဲတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြား neurotransmitter စနစ်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများခြုံငုံသုံးသပ်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာအချက်များမှ PFC activation ကိုလည်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် ဥပမာအားဖြင့်တစ်ပတ်လျှင်နာရီပေါင်း ၃၀ ကျော်အင်တာနက်ဂိမ်းများကိုကစားသောယောက်ျားလေးများသည်ဂိမ်း၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်စဉ် OFC, ACC၊ medial PFC နှင့် DLPFC တို့တွင် BOLD သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့ပြီးထိုလုပ်ဆောင်မှုများသည်ကစားရန်တိုက်တွန်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အလားတူစွာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလောင်းကစားဗီဒီယိုများကြည့်ရှုသည့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသူများသည်ညာဘက် DLPFC နှင့်ယုတ်ညံ့သည့် front gyrus30 တွင်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်လောင်းကစားရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားသမားများအတွက်အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုသည်လောင်းကစားကဲ့သို့သောအလုပ်တွင်အနိုင်ရခြင်းနှင့်ယှဉ်လျှင်အနိုင်ရခြင်းအပေါ်လက်ဝဲ ventromedial PFC BOLD တုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လောင်းကစားမေးခွန်းလွှာနှင့်အတူအကဲဖြတ်သည့်အတိုင်းလျှော့ချခြင်း၏အရွယ်အစားသည်လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွှန်ချက်များ (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက hyperactivations နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက hypoactivations နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) သည် ROI မှမောင်းနှင်နိုင်သည် (ဥပမာအားဖြင့် ventromedial PFC လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပိတ်ဆို့မှုများကိုမကြာခဏတွေ့မြင်ရပြီး 'default ဦး နှောက်' ကွန်ယက်၏အခန်းကဏ္ to မှစွပ်စွဲခဲ့သည်39) , တဏှာအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု (တဏှာ Refs 40, 41, 42 တှငျအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့် Ref ။ 43 တွင်ဖော်ပြထားသည်), တာဝန်ကွဲပြားခြားနားမှုသို့မဟုတ်ဤအပိုင်း၏အဆုံးမှာအကျဉ်းချုံးထားတဲ့နည်းစနစ်အချက်များ။
အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများသောရောဂါများသည်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် PFC တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဤရောဂါများနှင့်စွဲလမ်းမှုသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆားကစ်များ၌အလားတူအပေးအယူများပါ ၀ င်သောကြောင့် ၄ င်းသည် striatal dopamine D44 receptor ရရှိနိုင်မှုတို့ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သာဓကအားဖြင့်အစားအစာ၏ပုံများ (အစားအစာမဟုတ်သောပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ကြည့်နေသော anorexia သို့မဟုတ် bulimia နှင့်အတူအမျိုးသမီးများသည်ဘယ်ဘက် ventromedial PFC2 တွင် fMRI BOLD တုံ့ပြန်မှုများတိုးလာသည်။ bulimia ရှိလူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက anorexia ရှိလူနာများသည်အစားအစာဓါတ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် OFC activation ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ DLPFC ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် bulimia ရှိလူနာများတွင်လျော့နည်းသွားသည်။ ဤဒေသသည်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အစာမစားသောအစားအစာမမှန်သည့်အမျိုးသမီးများသည်ဘာသာရပ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်ခန္ဓာ - ရုပ်ပုံနှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးအစုံမှအနှုတ်သဘောဆောင်ဆုံးစကားလုံးကိုရွေးချယ်ရာတွင်လက်ဝဲ ventromedial PFC ကိုဖွင့်သည်ကိုပြသည်။ ကြားနေစကားလုံးအစုံ) 45 ။ ထိုသို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာစကားလုံးများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ ဤဒေသ၏လှုပ်ရှားမှုသည်ဤလူနာအုပ်စု၏အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အများဆုံးဆက်စပ်မှုရှိသည့်စကားလုံးများဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်ဟုညွှန်ပြသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားသမားများ၏ရလဒ်များနှင့်အတူယူပြီး ventromedial PFC တုံ့ပြန်မှုများသည်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသည့်လူ ဦး ရေနှင့်အမြင့်မားဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်မကြာမီကအကြံပြုခဲ့သည့်အတိုင်းစွဲလမ်းမှုတွင်ကုထုံးဆိုင်ရာကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုကိုခြေရာခံရန်ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
abstinence, မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုကြားဝင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဤတွင်ကျနော်တို့သိမြင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ရေရှည် abstinence အဆိုပါ PFC အတွက် cue-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှု attenuate နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရေတိုရေရှည် abstinence ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်တင်ပြသည်။ PFC cue-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ရေတိုရေရှည် abstinence ၏သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးကျယ်ကျယ်နီကိုတင်းစွဲလမ်း (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S4 (စားပွဲ)) အတွက်လေ့လာခဲ့ပြီ။ တစ်သွေးလွှတ်ကြောလှည့်ဖျားတံဆိပ်ကပ် MRI လေ့လာမှုများတွင်ဆေးလိပ်သောက်အတွက် 12 နာရီ abstinence အဆိုပါ OFC အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ CBF နှင့်ဒေသတွင်း CBF တဏှာတိုးလာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ROIs အတွက် CBF အပြောင်းအလဲများကိုတဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာ symptoms50 နှင့်အတူ correlating နှင့်တကွ, လက်ျာဘက် PFC အတွက် CBF လျော့နည်းသွားသည်။ 8 ရက်ပေါင်းအထိ DLPFC, ACC နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို smokers51 အတွက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus အတွက် - - ထိုသို့သောတိုးမြှင် cue reactivity ကိုလည်း abstinence ၏ရှည်ကာလအဘို့အစီရင်ခံခဲ့သည်ကိုလည်းအပြုသဘော craving52 ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ သို့သော်အချို့လေ့လာမှုများ cue-သွေးဆောင် PFC activity53 အပေါ် abstinence မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုသတင်းပို့ပါ။ ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည်ထိုကဲ့သို့သော study54 ရဲ့အဆုံးမှာဆေးလိပ်သောက်ဖို့မြျှောလငျ့အဖြစ်ရလဒ်များကိုမှသိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုအထောက်အကူပြုသောအခြားအကြောင်းရင်းများ, မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် above13 ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, တစ်ဦးတည်းမျှော်လင့်စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် PFC activation အပေါ်စူးရှသောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုများကိုတုပမေညျ။ မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုများအတွက်မျှော်လင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုနှင့် abstinence ထိတွေ့ခြင်း - - အားလုံးသုံး variable တွေကိုရသောလေ့လာရေး PFC လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများအတွက်စူးစမ်းနေကြသည်သူတို့ကြီးမားသောနမူနာပါဝင်အထူးသဖြင့်လျှင်, အသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်။ PFC cue reactivity ကို၏ယာယီဒိုင်းနမစ်လည်းရေရှည် abstinence ကာလတစ်လျှောက်လုံးအတူတူပင်တစ်ဦးချင်းခြေရာခံ, longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်စူးစမ်းခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
သုတေသနတစ်ဦးကအလားအလာလိုင်း cue reactivity ကို၏အမူအကျင့်မော်ဂျူစူးစမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, တဏှာ၏ဖိနှိပ်မှုအတွက် mOFC များအတွက်အခန်းကဏ္ဍကင်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကပေလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်များကအကြံပြုခဲ့သည်။ တဏှာကင်း-related တွေကိုဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်ပြီးနောက်တိုးမြှင့်ခြင်း, တဏှာအဆင့်ဆင့်ဟာ medial PFC55 အတွက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ အရေးကြီးတာက, သင်တန်းသားများကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်သောအခါ - ဗီဒီယိုကိုကြည့်မတိုင်မီ - တဏှာတားစီးဖို့, လက်ျာ mOFC အတွက်ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းသွား, ဤ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါဒေသဖြစ်သည့်လက်ျာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus (Brodmann ဧရိယာ 44) ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ, ဒီ activation craving56 နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းပေမယ့်ကုသမှုကို-ရှာကြံစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်, ဆေးလိပ်သောက်-ဆက်စပ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းတဏှာခုခံတွန်းလှန်ဖို့ညွှန်ကြားချက်, DLPFC နှင့် ACC activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတဏှာနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်အတွက်အပြောင်းအလဲ၏ညှနျကွားတဏှာဖိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုသောအမူအကျင့်မဟာဗျူဟာများက modulated စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဒီကြော့လေ့လာမှုမှာတော့စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ဓာတ်ပုံများကို (စီးကရက်-related အစားအစာ-related တွေကိုနှိုင်းယှဉ်) 57 တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုစားသုံး၏ရေရှည်အကျိုးဆက်များနှိုင်းယှဉ်ချက်ချင်းစဉ်းစားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ရေရှည်အကျိုးဆက်များစဉ်းစားသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ် PFC ဒေသများတွင်တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ (DLPFC နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus) ဆက်စပ်နှင့်တဏှာ (mOFC နှင့် ACC) နဲ့ဆက်စပ် PFC ဒေသများတွင်လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များရေရှည်အကျိုးဆက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအပြင်, Self-အစီရင်ခံတဏှာယုတ်လျော့, ထိုသို့အဆိုး dACC နှင့် DLPFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကကြားဝင်ဖြန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ DLPFC အတွက်တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တဏှာအတွက်စည်းမျဉ်း-related လျှောက်လျော့နည်းအကြားအသင်းအဖွဲ့ပုံစံအတွက် ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားများမှပြီးနောက်မရှိတော့သိသာခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ablation သို့မဟုတ် optogenetic tools တွေကိုသုံးပြီး preclinical လေ့လာမှုများပိုကောင်း PFC နှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုနှိပ်ကွပ်အတွက် ventral striatum ရဲ့အပြန်အလှန်နားလည်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ အတူတူယူ, တဏှာနှိမ်နင်းရန်အမူအကျင့်ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်အားထုတ်မှုနဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု (DLPFC, dACC နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus) လွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်း PFC ဒေသများအကြားခွဲခြားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုထားမော်ဒယ် (ပုံ။ 3) မှပံ့ပိုးကူညီမှုပေး မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်စိတ်ခံစားမှုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, တဏှာနဲ့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူ (mOFC နှင့် ventral ACC) ကိုထင်ဟပ်သောသူတို့။
မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် PFC လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆိုးကျိုးများ, မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုတူတဲ့ထိတွေ့အနှစ်ချုပ်စေရန်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ abstinence နှင့်မျှော်လင့်ထား၏ကြာချိန် (နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေး-related အမှတ်တရများ၏ဖွဲ့စည်းအဖြစ်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များ) ၏သက်ရောက်မှုပေမယ့် နှင့် PFC function ကို၎င်းတို့၏ထူးခြားသောပံ့ပိုးမှုများကို, ကြီးမားတဲ့နမူနာအရွယ်အစားအတွက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အပိုဆောင်း neuropsychological လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းရန် cue reactivity ကို၏လေ့လာမှုများတိုးချဲ့အသုံးပြုပုံနှင့် PFC လှုပ်ရှားမှုနဲ့ (ဥပမာ, တဏှာ) တိကျသော end-အချက်များအကြားဆက်စပ်မှု၏ညှနျကွားရှာဖွေစူးစမ်းအသုံးပြုပုံစွဲအတွက်တိကျတဲ့ PFC ဒေသ Active ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုရှင်းလင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ cue reactivity ကိုသို့အနာဂတ်လေ့လာမှုများအဘို့တစ်ဦးကထပ်မံထောက်ခံချက်တိုက်ရိုက်အစည်းအဝေးများအကြားနှိုင်းယှဉ် (မွတ်မပြေနိုင်သောနှိုင်းယှဉ်ဥပမာ abstinence) နှင့်တာဝန်အခြေအနေများ (ကြားနေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဥပမာမူးယစ်ဆေး) လုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူမြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလည်းကြာချိန်နှင့်စူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုများနှင့်အတူတူပင်ဘာသာရပ်များအတွက်အခွအေနေတွေကိုမှအောက်ပါထိတွေ့အောက်ပါ PFC activation ၏ပုံစံကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ဘူး။ PFC cue reactivity ကိုအပေါ်ကို non-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာစရာများ (ဥပမာ, အစားအစာ၏) ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်နှင့်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များကို (ဥပမာ, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အောင်မြင်မှုလှုံ့ဆျောမှု) ။ ဥပမာအားဖြင့်, နုပျိုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်စိတ်ကူးအစားအစာတဏှာ - တစ် monotonous အစားအသောက်များတွင်အားဖြင့်သွေးဆောင် - ACC (Brodmann ဧရိယာ 24) 58 အပါအဝင်အများအပြား limbic နှင့် paralimbic ဒေသများအတွက် activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
PFC လှုပ်ရှားမှုကိုယ်တိုင်အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်း, ငါတို့အခြမနိုင်, သို့သော်ဒီသွေးဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါသည် - ဒါဟာကျွန်ုပ်တို့ ventral striatal စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ကြပြီမဟုတ်သကဲ့သို့မှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည် - ထို့ကြောင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်သည်ဤလှုံ့ဆော်မှုမှ PFC နှင့် subcortical တုံ့ပြန်မှုများအကြားလုပ်မရနိုငျ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုအကြိုးသက်ရောက်မှု။
ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်တုံ့ပြန် PFC လှုပ်ရှားမှုမူးယစ်ဆေး-related အပြောင်းအလဲနဲ့ (ပုံ။ 3) တို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် PFC လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများမှဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်းတင်ပြသည်။ အထူးသတဏှာ, မူးယစ်, ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်အစောပိုင်း abstinence တစ်ပြည်နယ်၌နေသောစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်ပေးရန် PFC ၏ sensitivity ကိုသိသိသာသာကျန်းမာ Non-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ attenuated လိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ် Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်မှ sensitivity ကိုယုတ်လျော့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာများ၏ကုထုံးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတစ်ဦးချင်းစီသည် non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောစစ်ကူတုံ့ပြန်ပုံကိုလေ့လာရန်အရေးကြီးပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်အားဤကဲ့သို့လျော့နည်းကျဆင်းမှုကို allostatic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်59 ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရမကြာခဏနှင့်ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအစားထိုးခြင်းကြောင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်များ ('ဆုလာဘ်') ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သည်းခံမှုနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းကို Slomon နှင့် Corbit60, ၆၂ တို့ကချမှတ်ထားသောပြိုင်ဘက် - ဖြစ်စဉ်အယူအဆအားဖြင့်လည်းဖမ်းယူသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ယာယီဒိုင်းနမစ်ကိုဖော်ပြသည်။ ဤတွင်ဤနေရာ၌ရံဖန်ရံခါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှစွဲလမ်းမှုသို့ပြောင်းလဲခြင်းတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်း (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်မြင့်မားခြင်း) အပေါ်တွင်အားဖြည့်ခြင်း (ဥပမာအားဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း) သည်သာလွန်လွှမ်းမိုးနေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပြုမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို 'အားဖြည့်သူများကထုတ်ယူသောနိုင်ငံများ' ဟုသတ်မှတ်ထားသည်အထိ 61 အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှု၊ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းစသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုတွင်အားနည်းနေနိုင်သည်။
Anhedonia မူးယစ်ဆေး dependence64 တစ် defining ဝိသေသဖြစ်ပြီး, အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါများအတွက်စံ - တစ်ဦး core ကိုလက္ခဏာအဖြစ် anhedonia ပါဝင်သော - (ကိုကင်း-စွဲ individuals50 ၏ဥပမာ 65%) အများအပြားမူးယစ်ဆေး-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေကြသည်။ ခံစားချက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားခိုင်မာတဲ့အသင်းအဖွဲ့ depression66 ဖို့ကန့်သတ်မထားဘူး, ဥပမာအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲမူးယစ်ဆေး relapse67 များအတွက်အန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S68 (စားပွဲ)) ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းသို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန််ပတ်သက်နေမည်သို့ပြောင်းလဲအပေါ်သုတေသနပြု၎င်း၏ infancy69,5၌တည်ရှိ၏။
ငွေသည်ထိရောက်သောစိတ္တဇ၊ အလယ်တန်းနှင့်ယေဘူယျအားဖြည့်အားဖြည့်ပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုအားဖြင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုရရှိပြီး၎င်းသည်နေ့စဉ်လူ့အတွေ့အကြုံတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒီဆုလာဘ်၏ညှိအပြောင်းအလဲနဲ့ထို့ကြောင့်စွဲအတွက်လူမှုရေးအရအားနည်းချက်စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှုယန္တရားကိုညွှန်ပြလိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သောလိုငွေပြမှုကို ပိုမို၍ ထူးခြားမှုကဤဆုလာဘ်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသောပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုးဆွမှုတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကစွဲလမ်းမှုတွင် ဦး နှောက်ဆုိုင်ရာဆားကစ်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများက 'သိမ်းဆည်း' ထားသည်ဟူသောအတွေးကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လည်းထွက်အုပ်ချုပ်မရနိုင်ပါ။
fMRI ၏လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ချင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကစဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုနှင့်အတင်းအကျပ်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အပေါ်မှန်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်ရရှိခြင်းအပေါ်မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုများတွင်ရေရှည်တည်တံ့သောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ် (လုပ်ငန်းလုပ်ကွက်များအတွင်းမတူညီသောအမြတ်အစွန်းကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခြင်း) သည်လက်ဝဲနှစ်ဖက်စလုံး၏ OFC ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့်တုန့်ပြန်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် DLPFC နှင့် rostral ACC တို့ကမည်သည့်ငွေကြေးပမာဏ (အမြင့်သို့မဟုတ်အနိမ့်အမြတ်> အမြတ်မရှိ) ကိုတူညီစွာတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ၇၂၊ ၇၃၊ ၇၅၊ ၇၆ နှင့် DLPFC ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဤပုံစံသည်ဆွေမျိုးဆုလာဘ်များအား OFC ၏အခန်းကဏ္ with နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကိုကာကိုလာစွဲနေသောဘာသာရပ်များသည်ဘယ်ဘက် OFC တွင် fMRI အချက်ပြမှုများကိုလျော့နည်းစေပြီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမြတ်အစွန်းပိုမိုမြင့်မားမှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မှတ်သားစရာမှာကိုကင်းစွဲစွဲလန်းနေသောဘာသာရပ်များ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်ငွေပမာဏအားလုံး၏တန်ဖိုးကိုတူညီကြသည် (ဆိုလိုသည်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ = အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀) ၇၈ ။ ဤအနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ကှဲလှဲ၏ရှစ်ဆယ်ငါးရာခိုင်နှုန်းကစွဲဘာသာရပ်များအတွက်ငွေကြေးဆုကိုမှနှစ် ဦး နှစ်ဖက် OFC နှင့် medial တိုကျရိုကျ gyrus (နှင့် amygdala) တုံ့ပြန်မှုမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုပိုမိုကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောလုပ်ဆောင်မှုများဖြင့်ပုံတူကူးယူရန်လိုအပ်သော်လည်းအချို့သောကိုကင်းဆေးစွဲသူများသည်ဆု၏တန်ဖိုးနှင့်ဆွေမျိုးကွဲပြားခြားနားမှုများအပေါ်တွင်ထိခိုက်လွယ်မှုများကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုအကြံပြုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရုတ်တရက်အားဖြည့် gradient ၏ gradients ထိုကဲ့သို့သောပြား "ချက်ချင်းဆုလာဘ်များ (ထိုကဲ့သို့သောရရှိနိုင်မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့) 70 နှင့်ပိုမိုကြီးမားပေမယ့်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်များ၏လျှော့၏အခြေခံကျသောအလွန်အကျွံတန်ဖိုးသို့မဟုတ်ဘက်လိုက်မှုအခြေခံလိမ့်မည်, ထို့ကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ခွန်အားနိုးမောင်းကိုလျှော့ချ။ ကောင်းမွန်သောကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအားဖြည့်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးခြင်းကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသသည့်အတွက်ဤရလဒ်သည်ကုထုံးနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်လက်တွေ့ရလဒ်များကိုခန့်မှန်းရာတွင်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ဤအယူအဆနှင့်အညီ၊ ဘာသာရပ်များနှင့်အလားတူသောလူ ဦး ရေတွင်မှန်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုငွေကြေးသုံးစွဲမှုနှုန်းကိုကိုကင်းသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် dACC ၏ hypoactivation ၏ဒီဂရီနှင့် rostroventral ACC (mOFC အထိတိုးချဲ့) ခြင်း hypoactivation သည်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ suppression71 သွေးဆောင်တပ်မက်။ ဤ PFC ROIs နှင့်ကိုကိုအားစွဲလမ်းသောဘာသာရပ်များရှိအလယ်အလတ် ဦး နှောက်တွင် cue ဓါတ်ပြုမှုနှင့်သွယ်ဝိုက်သောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ACC ဌာနခွဲများကိုအလိုအလျောက်မူးယစ်ဆေးဝါးတုန့်ပြန်မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေတွင်ဆိုလိုသည် ။72
ဒါဟာအထက်ဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုများအတွက်ဘာသာရပ်များငွေကြေးဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်ဖို့မတောင်းခဲ့ကြသည်ကိုမှတ်သားရပါမည်။ ကျနော်တို့ရွေးချယ်မှုအလားတူအထူးသဖြင့်တဏှာနှင့် Bing စဉ်အတွင်း, (အခြားစစ်ကူကျော်မူးယစ်ဆေးရွေးချယ်ရာတွင်) ပိုပြီးဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရွေးချယ်မှုအတွက်လျော့နည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြသနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားသူကိုစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထက်ကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် linear function ကို (အနိမ့်ဆုလာဘ်ကျော်မြင့်မား၏ရွေးချယ်မှု) ကိုလိုက်နာမယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်း ။ ဘာသာရပ်များစစ်ကူအကြားရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုလေ့လာရေးအများအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကသဘာဝဆုလာဘ်များရိပ်မိတန်ဖိုးကိုလျော့ကျနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ,, ပေးထားသောအခါရှေးခယျြမှုယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါး-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ novelty85 ကျော်မူးယစ်ဆေးကိုရှေးခယျြသော 86 87 လုံလောက်သောမိခင် behaviour88 နှင့်ပင် food89 ပြပင်သူတို့အားဖြစ်ကြောင်းပါပြီ ရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သော။ မှီခိုဆေးလိပ်သောက်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ် cigarettes90 အနိုင်ရအလားတူအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းသော်လည်းဘာသာရပ်များစီးကရက်သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအနိုင်ရနိုင်သည့်အတွက်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများတွင်ရံဖန်ရံခါဆေးလိပ်သောက်, စီးကရက်ထက်ပိုက်ဆံရယူရန်ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်။ ဆုလာဘ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအုပ်စု, လက်ျာ OFC အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနှစ်နိုင်ငံ DLPFC နှင့်မှီခိုဆေးလိပ်သောက်ပြသသော်လည်းအဆိုပါရံဖန်ရံခါဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဤဒေသများ, စီးကရက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့ထက်တစ်ဦးတိုးပွားလာငွေကြေးဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုမှပိုမိုမြင့်မားလှုပ်ရှားမှုပြထိုကဲ့သို့သော, ACC ကျန်ရစ်ခဲ့သည် ထိုကဲ့သို့သော anticipatory ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုမရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု။ ဤရွေ့ကားဒေသများတွင်လည်းမှီခို smokers90 အတွက်ထက်ရံဖန်ရံခါအတွက်ပိုက်ဆံမှပိုမိုမြင့်မား activation ပြသခဲ့သည်။
အတူတူကင်း-စွဲ individuals91, 92 (စ Box ကို2ကိုကြည့်ပါ) အတွက် neuropsychological စမ်းသပ်မှုအပေါ်အပြုအမူရလဒ်များကိုနှင့်အတူဤရလဒ်သည်, ဆုလာဘ်ဦးစားပေးမူးယစ်ဆေးများအတွက်ဦးစားပေးယှဉ်ပြိုင်တယ် (နှင့်တစ်ခါတစ်ရံထက်ကျော်လွန်) ထိုထိုကဲ့သို့သောစွဲထဲမှာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုဆွေမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်အထောက်အကူပြု မဟုတ်တဲ့မူးယစ်-related ဆုလာဘ်မှဆွေမျိုးတန်ဖိုးများကိုသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းအတွက် concomitant ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူအခြားအစစ်ကူများအတွက်ဦးစားပေး။
စိတ်ခံစားမှု reactivity ကို။
အထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သောလေ့လာမှုများစွာသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော (ဥပမာ - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သော) အချက်များအပေါ်တုံ့ပြန်မှုများ (အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သော) cues25, 26, 28, 46, 47 (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S3 (ဇယား) နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိသော၊ ။ PFC သည်အရက်သေစာစွဲစွဲသူများ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအမျိုးအစားအားလုံးမှရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်မှုအလွန်နည်းသည် ။28 Pterior PFC သည်ဘိန်းဖြူစွဲစွဲသူများ၏နှစ်သက်ဖွယ်ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်မှု ၂၆ နှင့်စားခြင်းချို့တဲ့သောလူနာများအတွက် PFC ၏တုံ့ပြန်မှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်26, 46 ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်၏ခန့်မှန်းချက်များ (ပုံ - ၃) နှင့်မတူဘဲ၊ PFC တုံ့ပြန်မှုတွင်ဤလေ့လာချက်များ၌မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောဆက်စပ်မှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ ဤရလဒ်နှင့်ရလဒ်ပုံစံ၏အမျိုးမျိုးကိုအခြားအချက်များအကြား - လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာ၊ နမူနာအရွယ်အစား၊ အလွဲသုံးစားမှု၏အဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် abstinence ၏ကြာရှည်မှုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၏ဆက်စပ်မှုကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ အသုံးပြုအစီအမံ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည် fMRI သို့မဟုတ် PET ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောယာယီ resolution ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောအသံသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် electroencephalography ကိုအသုံးပြုခြင်းမှအကျိုးရှိလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကရှင်းလင်းရုပ်ပုံလေ့လာမှုများသိမြင်-အပြုအမူတာဝန်များကို (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S5 (စားပွဲ)) သို့စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ထည့်သွင်းသည့်အခါပေါ်ထွက်လာ။ အသီးအသီးတိုတောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းသရုပ်ဖော်ထားတဲ့, ကာတွန်းတစ်စီးရီးထဲမှာဇာတ်ကောင်နှင့်အတူစာနာရန်လိုအပ်သည့်အခါဥပမာ, စိတ်ကြွဆေး-စွဲတစ်ဦးချင်းစီမေးခွန်း "အဘယ်အရာကိုအဓိကဇာတ်ကောင်ပိုကောင်းခံစားရစေပါလိမ့်မည်နည်း" 93 ဖို့ထိန်းချုပ်မှုထက်နည်းပါးလာမှန်ကန်သောအဖြေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေကြားတဲ့အခါမှာဘာသာရပ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, စွဲတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း (DLPFC နှင့် hyperactivation) OFC အတွက် hypoactivation ပြသခဲ့သည်။ abstinent ဘိန်းဖြူ-စွဲ individuals94 အတွက်တဦးတည်းလေ့လာမှု၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, တခြားအလားတူလေ့လာမှုများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာများ, စကားလုံးများသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမြင်ကွင်းများအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်တာဝန်များကိုမှ PFC တုံ့ပြန်မှုအတွက်စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များကဖော်ပြခဲ့သည်။ အရက်စွဲနှင့်အတူယောက်ျားငါးမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေများ၏ပြင်းထန်မှုစစ်ကြောစီရင်တဲ့အခါမှာဥပမာ, အနုတ်လက္ခဏာအသုံးအနှုန်းတွေလက်ဝဲ ACC အတွက်အနိမ့် Active နှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်ဘယ်ဘက် DLPFC နှင့်ညာဘက် dACC အတွက်ပိုမိုမြင့်မားတက်ကြွ controls95 နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ (သာယာသောနှိုင်းယှဉ်) မနှစ်မြို့ဖွယ်၏တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံ DLPFC အတွက်သာယာသော (နှိုင်းယှဉ်ကြားနေ) ပုံနဲ့ hyperactivations အစုတခုများ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်းစာတစ်စောင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်ဖျော်ဖြေနေစဉ်အပြင်, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ကင်းအသုံးပြုသူများအ ACC နှင့် dorsomedial PFC hypoactivations ပြသ pictures96 ။ အလားတူပင်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်သူများ (ကြားနေမျက်နှာများနှိုင်းယှဉ်) မျက်နှာဖုံးဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်နှာများ၏တင်ဆက်မှုတုံ့ပြန်လက်ဝဲ ACC hypoactivations နှင့်ညာဘက် DLPFC နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus hyperactivations ပြသ; အပြုသဘောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆီး cannabinoid အဆင့်ဆင့်နှင့်အရက် use97 ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှစ်နိုင်ငံ ACC တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းညာဘက် ACC တုံ့ပြန်မှု။ တစ်ဦး (စိတ္တဇကိန်းဂဏန်းများများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုစစ်ကြောစီရင်နှိုင်းယှဉ်) တာဝန်ကိုက်ညီအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်ဤပိုပြီး Self-အစီရင်ခံတင်ပြရန်လိုမုန်းတီးမှုနှင့်လူ့ sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်အတွက်မျက်နှာများပေါ်တွင်စိတ်ခံစားမှုစကားရပ်ကိုစစ်ကြောစီရင်ရသောအခါဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ဘယ်ဘက် dACC ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစိတ်ကြွဆေး-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် hyperactive ခဲ့သည် အဆိုပါစွဲ subjects98 ။
အတူတူယူ, ဤလေ့လာမှုများ DLPFC အထူးသဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွဲတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းများစွာသော hyperactive ကြောင်းဖော်ပြသည်။ hyperacivity ထက် hypoactivity ကိုပြသည့်လေ့လာချက်များအရ ACC သည်ရောထွေးသောရလဒ်များကိုပြသည်။ DLPFC ၏ hyperactivity သည် ACC hypoactivity အတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးသူများနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများအကြားလုပ်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှုမရှိခြင်းကိုဤလေ့လာမှုအများစုတွင်ရှင်းပြနိုင်သည်။ စိတ်မ ၀ င်စားသောနှင့် / သို့မဟုတ်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများကိုစိတ်ဖိစီးမှု၊ တဏှာသို့မဟုတ်ပိုမိုခက်ခဲသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုစိန်ခေါ်မှုများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာအဆိုပြုထားသောပုံစံ (ပုံ ၃) နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤဒေသများ၏အခန်းကဏ္betterကိုပိုမိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော၊ (DLPFC မှကမကထပြုသည့်) အဆင့်မြင့် PFC အမှုဆောင်အရာရှိကိုအချိန်မဆွဲဘဲခေါ်ယူခြင်းဖြင့်စွဲစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်အန္တရာယ်ပိုများစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အကန့်အသတ်ရှိသောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအရင်းအမြစ်များကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မသက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအကြားနှင့်ပုံစံရှိ 'အအေး' နှင့် 'ပူသော' ဖြစ်စဉ်များအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည် (ပုံ - ၃ တွင်ကြည့်ပါ) ။
အထက်ပါလေ့လာမှုများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအကဲဖြတ်ချက်များကိုအသုံးပြုသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောအားဖြည့်ဆေးများအားပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ငွေဆုံးရှုံးမှုကဲ့သို့သောအပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များမှလေ့လာမှုများအရ 'စွဲ' သောဘာသာရပ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်များနှင့်ဆက်စပ်နေလျှင်ပင်မြဲမြံသောဆေးဝါးများရှာဖွေနေကြောင်းပြသနေသည်99။ လူသားများတွင်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်သူနှင့်လက်ျာ ventrolateral PFC တွင် hypoactivation ကိုအစီရင်ခံတင်ပြသည်100 (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်များ S5 (ဇယား)) ။ လေ့လာမှုများပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်းဆေးစွဲခြင်း၌အပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်ဆေးများအားထိခိုက်လွယ်မှုလျော့နည်းစေခြင်းသည်လက်တွေ့ကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့် (ဥပမာဘောက်ချာများနှင့်အခွင့်ထူးများကဲ့သို့)၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ။ ထိရောက်သောအမျိုးအစားနှင့်အားဖြည့်ဆေးပမာဏကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်စွဲစွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရှိမရှိ၊ အလွယ်တကူပျံ့လွင့်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဤစိတ်ခံစားမှုများကိုကြုံတွေ့ရသောအခါနိမ့်ကျသောနိမ့်ကျမှုသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ကိုညွှန်ကြားသည့်အပြုအမူများ (ဥပမာအားဖြင့်ပျင်းစရာကောင်းသည့်အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ခြင်း) ကိုရေရှည်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းသည်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအားနည်းသောတားစီးထိန်းချုပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာတိုးမြှင့် impulsivity) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ ကိုကာကိုလာစွဲသူများအနေဖြင့် PFC ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အားစိုက်ထုတ်မှုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုသမှုလုပ်ငန်းများတွင်မပါ ၀ င်သောရလဒ်များဖြစ်စေနိုင်သည့်မက်လုံးပေးစဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုတာဝန်ကိုထပ်ခါတလဲလဲတင်ပြခြင်းနှင့်အချိန်စောခြင်းရှိသည်။
စွဲလမ်းအတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု
မူးယစ်ဆေးစွဲမှုသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော်လည်းပျံ့နှံ့နေပြီးသိမြင်မှုပြတ်တောက်ခြင်းများဖြင့်မှတ်သားထားသည် ။102, ၁၀၅ ။ ၎င်းသည်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တားဆီးထားခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုသမှုမှဆွဲဆောင်ခြင်းတိုးပွားလာစေနိုင်သည် ။103, 104. PFC သည်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အလုပ်လုပ်ခြင်းမှတ်ဉာဏ်၊ အခြားနေရာများတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်စွဲတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စိတ်မချရသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်လျှော့ (ဇယား 105 )1 ။ PFC ၏အခြားအရေးကြီးသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်သည်ချုပ်တည်းမှုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်စွဲလမ်းမှုတွင်ဤဖြစ်စဉ်တွင် PFC ၏အခန်းကဏ္onကိုအာရုံစိုက်သည် (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်များ S106 (ဇယား)) ။ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာလူတစ်ယောက်၏အမူအကျင့်ကိုအကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်မရရှိနိုင်သည့်အခါသို့မဟုတ်လုပ်ရန်မမှန်ကန်ကြောင်းသိမြင်သောအခါလူတစ် ဦး ၏အမူအကျင့်တစ်ခုကိုလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်နိုင်စွမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များကိုအချို့သတိပြုမိသော်လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းအားပြသသည်။ ချုပ်တည်းမှုအတွက်အဓိကကျသည့်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည့်ချို့ယွင်းသောတားဆီးထိန်းချုပ်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများ ၀ ယ်ယူနိုင်ရန်နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်အထက်တွင်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများစည်းမျဉ်းကိုအခြေခံရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားချို့ယွင်းလည်းစွဲဖို့တစ် ဦး ချင်းစီ predispose နိုင်ဘူး။ ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီ ၍6 သည်သူတို့၏ပထမဆယ်စုနှစ်ဘဝကာလအတွင်းကလေးများ၏ချုပ်တည်းမှုသည်၎င်းတို့၏တတိယဆယ်စုနှစ်ဘဝ၏ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုအားကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။
အဘယ်သူမျှမ-go နှင့် signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်များကိုရပ်တန့် / သွားပါ။
မကြာခဏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုကြသည်လုပ်ငန်းများသွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်နှင့်ရပ်တန့် signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန် (SSRT) ဖြစ်ကြသည်။ သွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်များတွင်ကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုထက်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ကော်မရှင်ပိုမိုအမှားအယွင်းများပြသခဲ့သည်နှင့်ဤမှတ်တိုင် trials109 စဉ်အတွင်း dACC အတွက် hypoactivation မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။ အခြားလေ့လာမှုမှာ, ကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီ inhibitory အပြုအမူလိုငွေပြမှုဟာမြင့်မားတဲ့အလုပ်လုပ်-မှတ်ဉာဏ်ဝန်အားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်; နောက်တဖန်, dACC hypoactivation လစ်လပ်တာဝန် performance110 နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်ဘိန်းဖြူ-စွဲယောက်ျား ACC အတွက် hypoactivation အတူသွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go task ထဲမှာနှေးကွေးတုံ့ပွနျမှုအကြိမ်ပြ PFC111 medial ။ အဆိုပါ SSRT ထံမှရလဒ်များအနက်ကိုဘော်ပြဖို့ပိုခက်ခဲသည်။ ဥပမာ, ACC ကင်း-စွဲယောက်ျားအတွက်ပျက်ကွက်တုံ့ပြန်မှုပြုခဲ့နှိုင်းယှဉ်အောင်မြင်သောတုံ့ပြန်မှုပြုခဲ့စဉ်အတွင်း hypoactive ကြီးနှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည် controls112 ၏ဆင်တူခဲ့သည်။ အဆိုပါ ACC အဆိုပါ fMRI scan113 ၏အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားအရက်သေစာတတ်ပြီးနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် abstinent အရက်သမား၌ဤတာဝန်အပေါ်ယူပြီးသတိထားအပြုအမူညှိနှိုင်းမှုနှင့်အန္တရာယ်နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း hypoactive လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ACC နှင့်ဆက်နွယ်သော function ကို - ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အ ACC အဆိုပါ abstinent အရက်သမားထိန်းချုပ်မှုထက်ရပ်နား signal ကိုများအတွက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကျကွီးမွတျအာရုံကိုကျင့်သုံးဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်၎င်း, တားစီး errors113 စဉ်အတွင်း hyperactive ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ PFC ၏အခြားဒေသများအတွက်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း 24 နာရီနေကြပြီးစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်အစီရင်ခံပေမယ့် (တစ်ဦးတိုးလာဒေသဆိုင်ရာ activation များအတွက်မျှော်လင့်မတူဘဲအတွက်) တိကျမှန်ကန်မှု reduced114 (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S4 (စားပွဲ)) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခံခဲ့ရပါတယ်
ဒီလေ့လာမှုတွေကနေရလဒ်တွေကိုအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဖြစ်နိုင်သည်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကွဲပြားမှု, နှိုင်းယှဉ်အမျိုးအစားအားဖြင့်နှင့်အခြား variable တွေကိုအပြင်မှာရှိတဲ့အုပ်စုများအကြားစွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တစ်ပုံစံဟာ dACC သည်ဤ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း hypoactive ဖြစ်သည့်အတွက်ပေါ်ထွက်လာ, ဤ hypoactivity အများစုအထူးသဖြင့်တိုတောင်း abstinence Duration အတူချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ပစ်မှတ်ထားသိမြင်-အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်သည်ဤကမောက်ကမဖြစ်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, (ထိုသို့သောမကြာမီအဘယ်သူမျှမ-go ရုံးတင်စစ်ဆေး၏သတိပေးပေးကဲ့သို့) သိကောင်းစရာများ cueing တစ်သွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go task ထဲမှာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင်, ဤစိတ်ကြွဆေး-စွဲ individuals115 အတွက်ပိုကောင်း ACC activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းထိုသို့သောသိမြင်-အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်, အာရုံကြောပြန်လည်ထူထောင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တပြိုင်နက်တည်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
Inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကိုလည်းအရောင်-စကားလုံး Stroop task116 သုံးပြီးအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတာဝန်အပေါ် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းပိုနှေးတယ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပိုပြီးအမှားအယွင်းများ PFC ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမာခံများဖြစ်ကြသည်။ Neuroimaging သုတေသနပဋိပက္ခထောက်လှမ်း (dACC) နှင့် resolution ကို (DLPFC) 117 တွင်ဤဒေသများများအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ, ပု dACC နှင့် DLPFC ဒီ task118 အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်း 119 120 ပြသခဲ့သည်။
စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရောင်-စကားလုံး Stroop တာဝန် အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအများအားဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်သူတို့အား echo ကြောင်းရလဒ်များကိုသတင်းပို့ပါ။ လက်ျာ ACC ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံပြသသော်လည်းဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများ, အရတော့စမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းလက်ဝဲ dACC နှင့်ညာဘက် DLPFC အတွက်အနိမ့် CBF ရ၏ ထိုမှတပါး, ညာ ACC activation အဆိုးကိုကင်း use121 (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S6 (စားပွဲ)) ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ဆေးခြောက်-သုံးပြီးယောက်ျားအတွက်, ဒီတာဝန်စဉ်အတွင်းအောက်ပိုင်း CBF perigenual ACC, ventromedial PFC နှင့် DLPFC122 အပါအဝင်အများအပြား PFC ဒေသများ, အစီရင်ခံခဲ့သည်။ စိတ်ကြွဆေး-မှီခိုဘာသာရပ်များလည်းဒီ task123 ဖျော်ဖြေနေစဉ် dACC နှင့် DLPFC အပါအဝင် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက် hypoactivations ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ go / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်တစ်ခု 114 နာရီ abstinence နှေးကွေးတုံ့ပြန်မှုကြိမ်ရှိခဲ့နှင့် dACC တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အရောင်ကို-စကားလုံးအပေါ် incongruent စမ်းသပ်မှုတွေမှလက်ျာဘက် DLPFC တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချပြီးနောက်စမ်းသပ်ပြီးသူ above12, စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်အစီရင်ခံအပေါ် abstinence ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း Stroop task124 (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S4 (စားပွဲ)) ။ အရေးကြီးတာကတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှုကုသမှုစတင်ခြင်းကိုကင်း-စွဲ individuals10 အတွက်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းမတိုင်မီ Stroop တာဝန် 32 ရက်သတ္တပတ်ဖျော်ဖြေမယ့်အရောင်-စကားလုံးစဉ်အတွင်း ventromedial PFC (Brodmann ဒေသများ 8 နှင့် 125) ၏ကြောင်း activation ပြသခဲ့သည်။
ဒီအလုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူကွဲမှာအရောင်စကားလုံးများကိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစကားလုံးများ (သို့) အရက်သေစာစွဲစွဲသူများအတွက်အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးများကဲ့သို့သောလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောရုပ်ပုံများကိုအစားထိုးသည်။ အဆိုပါဂန္နှင့်စိတ်ခံစားမှု Stroop စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သောလှုံ့ဆော်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်အာရုံထွေပြားသတင်းအချက်အလက်မှတုံ့ပြန်မှုကိုဖိနှိပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပါဝင်သော်လည်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Stroop တာဝန်သာအာရုံထွေပြားအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆက်စပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ Stroop ဒီဇိုင်းများသည်စွဲလမ်းနေသောပြောင်းလဲထားသော PFC လှုပ်ရှားမှုကိုထပ်မံခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပconflictိပက္ခတစ်မျိုးမျိုးအတွက်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသလားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေတွင်ပinိပက္ခများအတွင်းအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသလား။
လှုံ့ဆော်သည်အသုံးပြုသူများအတွက် fMRI လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေး-related စကားကိုအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုပြသခဲ့သည်: စွဲတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲထိန်းချုပ်မှု, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်စကားများကိုမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်အရောင်များ၏ပျမ်းမျှတုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်အနုတ်ဟာပျမ်းမျှအဖြစ်တိုင်းတာ (မူးယစ်ဆေး-related စကားလုံးများကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုပြသ တိုးမြှင်လက်ဝဲ ventral PFC တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သောလိုက်ဖက်ကြားနေစကားများမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်အရောင်များ) ၏တုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်။ ထိုသို့သောတုံ့ပြန်မှုအရောင်-စကားလုံး Stroop task126 ဘို့စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပါ။ အလားတူပင်မူးယစ်ဆက်စပ်ရုပ်ပုံများစီးကရက် smokers127 အတွက်တာဝန်-သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်မှ dACC တုံ့ပြန်မှု amplified ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စွဲအတွက်ပိုပြီးအထက်မှအောက်သို့အရင်းအမြစ်များကိုမူးယစ်ဆေး-related တွေကို task ကိုစဉ်အတွင်း distractors (အရှင်အာရုံကို biasing) အဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သည့်အခါသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအများနှင့်အခြား results128 နှင့်အတူပဋိပက္ခဖြစ်နေသောမူးယစ်ဆေး-related စကားလုံးများကိုနှေးကွေးစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို errors83, 129 နဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့ကြရသောလက်ရှိကင်းသုံးစွဲသူများအတွက်လေ့လာမှုများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကမညီမျှမှုတာဝန်ဒီဇိုင်းဒါမှမဟုတ်လေ့လာမှုပါဝင်သူများ၏ကုသမှု-ရှာကြံ status ကိုဆက်စပ်သောနိုင်; ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါး-related စကားလုံးများနှင့်ကြားနေစကားလုံးများကိုအကြားအဆင့်မြင့်ပဋိပက္ခမူးယစ်ဆေးဝါးများကြဉ်ရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်တဲ့သူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ဘို့သက်သေအထောက်အထားမကြာသေးမီက published130 ဖြစ်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအားစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တိုက်ရိုက်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်မှုမှ PFC လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း (အထက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S2 (ဇယား) ကိုကြည့်ပါ) မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးကုသမှုအယူအဆကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်131, 132. ဤယူဆချက်အရမူးယစ်ဆေးဝါးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး - နှင့် PFC လှုပ်ရှားမှုတွင်ဆက်နွယ်မှုများပြားလာခြင်း - မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကုသမှုအသိုင်းအဝိုင်းကယခင်ကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ဘိန်းဖြူမှီခိုမှုအတွက်မက်ဂဒွန် (ဓာတု opioid) ကိုဘိန်းဖြူမှီခိုမှုအတွက်ပုံမှန် agonist အစားထိုးကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကသက်သေပြခဲ့သည်။ fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဘိန်းဖြူစွဲစွဲသူများအတွက်ကြိုတင်ထိုးထားသောမီသဒုန် session တစ်ခုအတွင်း၌ဘိန်းဖြူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုကြည့်ပြီးဆေးသောက်ပြီးနောက်၌စွဲလမ်းမှုလျော့နည်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ (OFD133 ၏နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S4) (စားပွဲတင်) ။ လက်တွေ့အထောက်အပံ့သည်ကိုကင်းစွဲသူများအတွက်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်ရန်စတင်စုဆောင်းနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင် (extracellular dopamine level တိုးပွားစေသည့်) သွေးကြောသွင်းကင်းကင်းသည်သွား / မသွားသည့်အလုပ်တွင်တားစီးထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည် ACC လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာ ၀ န်အတွင်းတွင်မှန်ကန်သော DLPFC activation134 နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ Intravenous MPH (ထို့အပြင် extracellular dopamine level များကိုတိုးမြှင့်ပေးသော) သည်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်သူများအတွက် SSRT အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်း၊ ၎င်းသည်လက်ဝဲအလယ်တန်းရှိ Cortex ၏တားစီးမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းနှင့် ventromedial PFC တွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အဆိုးဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ MPH အပြီးတွင်ဒေသနှစ်ခုလုံးတွင်လုပ်ဆောင်မှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်ရန်အလားအလာရှိသည် ။135 PET လေ့လာမှုတစ်ခုအရပါးစပ်မှ MPH သည်ကိုကာကိုလာစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီရှိကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်နောက်ကျသော OFC နှင့် DLPFC အပါအ ၀ င် limbic ဦး နှောက်ဒေသများတွင်ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Stroop လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းကိုကင်းဆေးစွဲသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများတွင်ကော်မရှင်၏အမှားများ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်။ စွဲစွဲသူများအတွက်မူဤကျဆင်းမှုသည် rostroventral ACC တွင်ပုံမှန်တက်ကြွခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ mOFC) နှင့် dACC၊ MPH စီမံခန့်ခွဲမှုမတိုင်မီ dACC လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုသည်တိုတောင်းသောတစ်သက်တာအရက်သုံးစွဲမှု136 (ပုံ - ၄) နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ MPH ၏ noradrenergic သက်ရောက်မှုများသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများအားပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေလေ့လာရန်ကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းရလဒ်များအရ MPH ၏ dopamine တိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုများကိုစွဲစွဲသူများ၏အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အသုံးပြုနိုင်သည် ( ဥပမာအားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် MPH ကုသမှုကိုအထူးသိမြင်မှုဆိုင်ရာကြား ၀ င်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါက၊
ပုံ4| ကိုကင်းစွဲအတွက် anterior cingulate cortex လှုပ်ရှားမှုနဲ့ function ကိုအပေါ်ပါးစပ် methylphenidate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။
Methylphenidate အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI cingulate တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ကိုကင်းစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဓိက (remunerated cue reactivity ကို) သိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်ကော်မရှင်အမှားများကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ တစ်ဦး | ကိုကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် methylphenidate မှပိုကောင်းတုံ့ပြန်မှု (MPH) ပြသသော cortical ဒေသတစ်ခု axial မြေပုံ။ အဆိုပါ medial orbitofrontal cortex (; Brodmann ဒေသများ 24 နှင့် 32 mOFC) ကိုသက်တမ်းတိုးရေးနှင့် rostroventromedial ACC (rvACC); ဤဒေသများ dorsal anterior cingulate cortex (Brodmann ဒေသများ 10 နှင့် 32 dACC) ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ၏အရေးပါမှုကိုအဆင့်ဆင့် (T ကရမှတ်) color-coded (အရောင်စကေးအားဖြင့်ပြသ) ဖြစ်ကြသည်။ ခ | မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်စကားများရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုစဉ်အတွင်း; (Brodmann ဒေသများ9နှင့် 42 က x = -6, y က = 10, z = -32) ကို mOFC မှသက်တမ်းတိုးရေးအတွက် rvACC အတွက် BOLD signal ကိုအကြားဆက်စပ်မှု (ရလဒ်များအရအိပ်ယာထံမှ% signal ကိုပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ပေးအပ်) အဆိုပါ fMRI တာဝန်အပေါ် (: MPH အနုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှစ်ဦးစလုံးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရမှတ်များဖြစ်ကြသည်) ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့် 13 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 14 တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ကြသည်။ ပုံ Ref ထံမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပြန်ထုတ်ပေးသည်။ 215 © (2011) အေထုတ်ဝေသူများ, Ltd. All rights reserved ။
ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစိန်ခေါ်မှုများဖို့ဦးနှောက်-အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပုံမှန်အပေါ် dopamine agonists ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု compulsive မူးယစ်ဆေး use126 သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောအခြေခံ Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တစ်သက်တာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်ကွဲပြားမှု, ဒါပေမဲ့အဲဒီဖြစ်နိုင်ခြေ၏ပုံစံများအပေါ်မူတည်စေခြင်းငှါသတိပြုသင့်ပါတယ် ပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစားအတွက်လေ့လာခဲ့ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် (ဥပမာ, cholinergic သို့မဟုတ် AMPA အဲဒီ receptor agonists များအတွက်) Non-dopaminergic စုံစမ်းစစ်ဆေးကိုကင်းစွဲ treatment138 များအတွက်အပိုဆောင်း pharmacological ပစ်မှတ်ပူဇော်စေနိုင်သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုသို့လေ့လာမှုရလဒ်တွေကို dACC hypoactivity နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လစ်လပ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုရှိကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Enhanced PFC လှုပ်ရှားမှုမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးသူ့ဟာသူ (သို့မဟုတ်အလားတူ pharmacological အေးဂျင့်) မှထိတွေ့မှုအပျေါမှာ, ရေတိုရေရှည်နေကြပြီးသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုလည်းမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုဤသိမြင်တာဝန်များကို, ရေတိုရေရှည် abstinence နှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်ပေမယ့်အလုပ်တစ်ခုကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ရှိသည်။ အဆိုပြုထားမော်ဒယ် (။ ပုံ 3) ၏အခြေအနေတွင် Viewed, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းပူဇော်သော်လည်းဤမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူနာတာရှည် Self-ဆေးဝါးရေရှည်အကျိုးဆက်များရှိပါတယ် - လျှော့ချ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားနှင့်ဆက်စပ်နေသောစိတ်ခံစားမှုပြတ်တောက် - နှင့်အတူလျော့ကျမရစေခြင်းငှါ, ရေတိုရေရှည် abstinence နှင့်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုထိတွေ့အပေါ်သို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကြိုးစားနေကြကြောင်းခံရဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပုံမှန်, မျက်မြင်လက်တွေ့အခြေပြုနဲ့ပစ်မှတ်ထား pharmacological နှင့်သိမြင်မှု-အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီး - သက်ဆိုင်ရာစစ်ကူတွေနဲ့ပေါင်းစပ် - စွဲလမ်း၏ကုသမှုအတွက်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းကမ္ဘာကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည့်စွမ်းရည် (အပြန်အလှန်နားလည်မှုကိုလွှမ်းခြုံထားသော်လည်းပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်ခံစားမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုသတိပြုခြင်းအထိတိုးချဲ့ခြင်း) သည် PFC အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူတည်သည်။ အထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သောစွဲသူများနှင့် PFC လုပ်ဆောင်မှုတွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောကြောင့်အမူအကျင့်အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ကုသမှုလိုအပ်မှုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသိရှိထားခြင်းသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတွင် 'ငြင်းပယ်ခြင်း' ဟုအဓိပ်ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအခြေခံကောင်းဖြစ်နိုင်သည် , စွဲလူနာသည်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏လိုငွေပြမှုကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်ပေမယ့်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုဖို့ရွေးချယ်သောယူဆချက်မှားဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်လေ့လာမှုများအရစွဲစွဲသူများသည်သူတို့၏နာမကျန်းမှုပြင်းထန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုနှင့်အပြုအမူများနှင့်ယင်း၏အကျိုးဆက်များကို) အပြည့်အဝသတိမပြုမိကြောင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ရှိလိုငွေပြမှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။
အများအပြားလေ့လာမှုများ Self- အမြင်နှင့်စွဲအတွက်အမှန်တကယ်အပြုအမူများအကြားတစ် ဦး dissociation ဘို့သက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများတွင်ငွေကြေးအရအခပေးရသည့်အတင်းအဓမ္မရွေးချယ်သောစဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုတာဝန်ရှိသည့်ကြားနေအချက်အလက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသောငွေကြေးအခြေအနေအတွက်တုန့်ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုသည်လုပ်ငန်းတွင်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကိုကာကိုလာဘာသာရပ်များ၏တာ ၀ န်ယူမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများသည်၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းအားနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခြင်းသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုလှုံ့ဆော်သောအပြုအမူများအကြားစိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းကိုပြသနေသည်70။ သင်တန်းသားများသည်မကြာသေးမီကတီထွင်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ ၄ င်းတို့၏နှစ်သက်ဖွယ်ရုပ်ပုံများကိုရုပ်ပုံလေးမျိုးမှရွေးချယ်ပြီးသူတို့အများဆုံးရွေးချယ်ထားသောရုပ်ပုံအမျိုးအစားကိုတင်ပြခဲ့သည် ။91၊ ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်မှုအကြားကွဲလွဲမှု - ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအားအမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှုကိုဖော်ပြသည် လက်ရှိကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းမှာလတ်တလောကိုကင်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် abstinent အသုံးပြုသူများကိုလည်းသိမြင်နိုင်သည်။
OFC တွေ့ရှိမှုအရမျောက်များအားပြန်လည်စစ်ဆေးမှုကာလ၌အပြုအမူနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ လူသားများတွင်လည်းအလားတူအာရုံကြော - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာခွဲထွက်မှုများအတွက်အထောက်အထားအချို့ရှိပါသည်။ အပေါ်က ၇၀ တွင်ဖော်ပြထားသောတာဝန်ကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်တုတုံ့ပြန်မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုအကြိမ်များကိုကြားနေအချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲမှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤပုံစံကိုကိုကင်းစွဲနေသောအုပ်စုတွင်မတွေ့ရပါ။ ၎င်းတွင်ငွေကိုတိကျစွာတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်း (ဆိုလိုသည်မှာဤအားဖြည့်ရန်အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်) သည်မကြာသေးမီကကိုကင်းသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အဆိုးဆက်စပ်နေသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ထိန်းချုပ်သူများ၏ရွေးချယ်မှုသည်အမှန်တကယ်နှင့်မှားယွင်းသောအမှားနှစ်မျိုးလုံးကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ကြောင်း၊ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများသည်သူတို့၏အမှားများကိုသာ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်၊ အယောင်ဆောင်မှားယွင်းမှုများသည်အားကောင်းသောအာရုံကြောတုန့်ပြန်မှု140 စွဲအတွက်အာရုံကြော - အပြုအမူ dissociations ရန်။ အဆိုပြုထားသောပုံစံ (ပုံ - ၃) တွင်ဤယန္တရားသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဒေသများသို့ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ဒေသများမှသွင်းအားစုများလျော့နည်းသွားခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။
အရေးကြီးသည်မှာလူသားများတွင်ဤအာရုံကြော - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာခွဲခြားမှုကိုလူနာများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမိသားစု ၀ င်များသို့မဟုတ်ကုသမှုပေးသူများကဲ့သို့သတင်းပေးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အတည်ပြုနိုင်သည်။ Self-report အစီအမံများသည်ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားကွဲလွဲမှုများအားအရေးကြီးသည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးသည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော် Self- အစီရင်ခံစာများကိုကန့်သတ်ချက်များရှိသောကြောင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်သိမြင်နားလည်မှုဆိုင်ရာပိုမိုတိကျသောတိုင်းတာမှုများသည်သုတေသနနှင့်လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အရေးပါသည်။ အလားအလာရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ရပ်မှာအမှားအယွင်းရှိခြင်းနှင့်ကိုက်ညီခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သွား / မသွားအလုပ်တွင်အမှားအယွင်းရှိခြင်းသည်ဆေးခြောက်ချိုးဖောက်သူလူငယ်များတွင်လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်နှစ်နိုင်ငံ DLPFC နှင့်မှန်ကန်သော ACC လျှော့ချခြင်းနှင့်လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မက်သာဖီတမင်းဆေးမှီသောဘာသာရပ်များတွင်နှစ်ဖက် ventrolateral PFC သည်ထိခိုက်မှုကိုက်ညီမှုရှိစဉ်အတွင်း hypoactive ဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Self- အစီရင်ခံသော alexithymia137 နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပြင်းထန်မှုကိုပိုမိုသိရှိနားလည်လာခြင်းကအရက်သမားများအားကုသမှုခံယူပြီးနောက်တစ်နှစ်အထိအမှန်တကယ် abstinence ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ143၊ ဤရွက်ပေါက်နေသောသုတေသနလိုင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်လာစေရန်၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြားဝင်ဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိအမြင်လျော့နည်းသွားသူစွဲတစ် ဦး ချင်းစီ။
ဒီကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏အဓိကန့်အသတ်ရှိသမျှသည်အခြားသော cortical ဦးနှောက်ဒေသများနှင့် subcortical အဆောက်အဦများဖယ်ထုတ်ပြီး၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ PFC ပေါ်မှာငါတို့ရွေးချယ်အာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောယူမှုကိုအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုထောက်ပံ့အဆိုပါဗိသုကာရှုပ်ထွေးသည်နှင့်, ထို PFC အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအထ parietal cortex, insula, thalamus နှင့် cerebellum147 ကဲ့သို့သောအခြားဒေသများပါဝင်သည်အများအပြားအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များပါဝင်မှထင်နေသည်။ အကျိုးဆက်များနှင့်လည်း Cross-Section လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများ၏မွေးရာပါန့်အသတ်ပေးထား, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုရှောင်ကြဉ်ရပါမည် - သည်, ထို PFC တိုက်ရိုက်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့လိုငွေပြမှုကိုမောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ စွဲလမ်းတွင်ဤအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များပြတ်တောက်စူးစမ်းသောအနာဂတ် Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် mechanistic လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုအတူ imbued ရပါမည်။
အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုအများအပြားနှင့်အတူတစ်ဦးကမှတ်သားလောက်ပြဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ရွယ်သူတို့၏အသုံးပြုမှုမှုနှငျ့ဆတစ်ခါတစ်ရံမြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏ပိုပြီးတင်းကြပ်စာရင်းအင်းပြင်ဆင်ချက်ကင်းမဲ့ကြောင်းလေ့လာဆန်းစစ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အနိမ့်အာဏာကိစ္စများကျော်လွှားဖို့, ရှိသမျှတာဝန်အခြေအနေများအားလုံးကိုဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာရလဒ်များကိုပြဒေသများတွင်လေ့လာဆန်းစစ်ရလဒ်များကိုတခါတရံ post-hoc ဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်အစီရင်ခံ; မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်လုပ်ငန်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်လက်တွေ့အဆုံး-အချက်များနှင့်အတူအဓိက (လှုံ့ဆော်မှုများဥပမာအားဖြင့်, အုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်အမျိုးအစား) ၏လေ့လာဆန်းစစ်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ဆက်စပ်၏, တသမတ်တည်းဖျော်ဖြေကြသည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောရွယ်ရလဒ်များကိုတစ်ဦးအမျိုးအစားငါအမှားကိုယ်စားပြုနိုင်ပေမယ့်သူတို့မှာလည်းဥပမာ, တဏှာသို့မဟုတ်တဏှာကိုထိန်းချုပ်ဘို့, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်ရှိဖြစ်ရပ်ဆန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုသော့ချက်အာရုံကြောအလွှာဟာလွဲချော်နိုင်ပါတယ်။ Post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏ကန့်သတ်မှုကျော်လွှားတစ်လမ်းနှစ်ဦးစလုံးတပြင်လုံးကို-ဦးနှောက်ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးလုပ်ဆောင်ကိုလည်းလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီး ROIs ၏ nomenclature စံဖို့ကူညီနိုင်သည့်ခန္ဓာဗေဒ ROIs148, 149 သတ်မှတ်နေတဲ့ဦး, သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခွားသောဘုံကိစ္စများအလားအလာအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှဖြည့်စွက်ထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု (Deactivate နှိုင်းယှဉ် activation) ၏ဦးတည်ချက်ဖုံးကွယ်နိုင်သည့် (ထိုကဲ့သို့သောနှစ်ဦးစလုံးကိုဆိုလိုတာပေးနဲ့ကှဲလှဲ, သို့မဟုတ်မဆက်စပ်အစီရင်ခံရသောအခါ scatterplots ပေးမပေးကဲ့သို့) အမှန်တကယ်ဒေတာ, ၏မပြည့်စုံတင်ဆက်မှုမှစပ်ဆိုင်သောအ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရလဒ်များကို (ဥပမာ, တစ်ဦး hyperactivation အခြေခံကနေပိုမိုမြင့်မားတက်ကြွသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း Deactivate ရည်ညွှန်းနိုင်) ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီလယ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းကနေအကျိုးရှိမည်ဟု - ပုံရိပ်နှင့်ပတ်သက်သောလုပျထုံးလုပျနညျး, တာဝန်များကို, ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဘာသာရပ်စရိုက်လက္ခဏာတွေများ - တွေ့ရှိချက်များ၏စကားပြန်လွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့။ standardization အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ခွဲခန်းကနေဒေတာတွေကိုစုံ၏ပေါင်းစည်းမှုခွင့်ပြုဘို့ကိုလည်းအလွန်အရေးပါသည် - ထိုသို့သောဒေတာကောက်ခံမှုမျိုးဗီဇဗီဇအကြားဆက်စပ်မှုတွေနားလည်သဘောပေါက်မှာပါရည်ရွယ်သည်ဟုလေ့လာမှုများ, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, ဦးနှောက် function ကိုဤဖြစ်စဉ်များအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်ဒေတာအစုံ၏ဖန်တီးမှုစွဲဘို့အားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဘယ်လိုဗီဇကိုနားလည်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်သွားကြသည်စူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအပြီးနှစ်ဦးစလုံးလူ့ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေ။ ထို့အပွငျကြီးမားသောပုံရိပ်ဒေတာအစုံပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်း - မကြာသေးမီကအလုပ်လုပ်တဲ့ connectivity150 အနားယူ၏ MRI ပုံရိပ်တွေအဘို့ပြုထားပြီးအဖြစ် - အနာဂတျမှာကုသမှုလမ်းပြ biomarker အဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါစွဲ၏ neurobiology ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
(အစားထိုး inhibitory လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လက်ျာ PFC implicating, အထူးသဖြင့် ACC နှင့် DLPFC) အနည်းငယ်ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်ဒေတာစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများအကြာတွင်ညွှန်ပြခြင်းမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံစံကိုပြသ။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုတွင်မဆိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အာရုံစူးစိုက်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ နှောင့်အယှက်နောက်ပိုင်းတွင်ဘို့သက်သေအထောက်အထားလက်ညှိုးကိုပုတ်ကိုကင်း abusers151 အတွက်စဉ်အတွင်းရှိကွောငျးပေးထား, အထူးသစွဲလမ်းအတွက် iRISA အတွက် PFC အကြာတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြောင်းလေ့လာမှုများလိုအပ်နေပါသည်။ ထို့အပွငျရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှုနှင့်စွဲဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျား, မကွဲပြားမှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပုံရိပ်လေ့လာမှုများလူ့ဦးနှောက်၏လိင် dimorphic features တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ သို့သော်ယခုအထိအနည်းငယ်ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများစွဲအတွက် PFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပြီ အစား, များစွာသောလေ့လာမှုတွေအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အထီးဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရပ်များ (အများအားဖြင့်ယောက်ျား) ကိုအသုံးပြုပါ။ လေ့လာရေးအခြားတစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများ၏အလားအလာပြောင်းလဲသက်ရောက်မှုလေ့လာစူးစမ်းဖို့လိုအပ်နေပါသည်; အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွား Co-နေကြလို့ပဲရောဂါ (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါစွဲ individuals152 အတွက်လိုငွေပြမှုပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါ) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် abstinence ၏ကြာချိန်၏ recency ၏သက်ရောက်မှု (ဥပမာ, ကိုကင်းကင်းအတွက်နောက်ခံ cognitive153 သို့မဟုတ် emotional154 ချို့ယွင်းမှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ခြင်းငှါနေကြတယ် ) တစ်ဦးချင်းစီ -addicted ။ longitudinal လေ့လာမှုများ PFC လုပ်ငန်းဆောင်တာ recover လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်မူးယစ်ဆေးကိုကြဉ်ရှောင်သောသူတို့အဖို့အထူးသဖြင့်အရေးပါမှုဖြစ်ကြ၏သောဤကိစ္စများ၏စာမေးပွဲ enable လိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်နှိပ်စက်တ္ထုများအမျိုးမျိုးအကြားနှိုင်းယှဉ်စွဲလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးဘုံဖြစ်နိုင်ကြောင်းအချက်များအနေဖြင့်အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအချက်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားအာရုံကြောနှင့်ဆူညံသံအဖြစ်စွဲလမ်းအတွက်အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကို၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကုသ၏, လေ့လာမှုများ key ကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူကစူးစမ်းလေ့လာနိုင်: iRISA အတွက် PFC ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအခြားသူများထက်အချို့သောစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ပါသလဲ အခြားသူတွေထက် Self-ဆေးဝါး drive ကိုမူးယစ်ဆေးအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုပြီးတာပါသလား ဘယ်လို (ဥပမာအများစုအရက်သမားနီကိုတင်း-စွဲဖြစ်ကြသည်), စွဲလမ်းအတွက် neurobiology ထိခိုက်စေ Co-နေကြလို့ပဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပါဘူး, ထိုခြွင်းချက်ထက်ပိုစိုးမိုးရေးဖြစ်သော? ကုသမှုရလဒ်ကိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဤအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏ဆိုလိုကဘာလဲ? အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ထိရောက်သောကုသမှုကြားဝင်၏ဒီဇိုင်းကိုအကြောင်းကြားဖို့စွဲထဲမှာလည်ပတ်သည့် PFC ပေါ်ဤအကြောင်းဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်တွေကိုအသုံးပွုနိုငျသနညျး
ယေဘုယျအားဖြင့် neuroimaging လေ့လာမှုများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲသူများအတွက်ယေဘူယျ PFC ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပုံစံအသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းမှာပိုမိုဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များ - မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၌ကိုကင်း (သို့) အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုတင်ပြသည့်အခါကျယ်ပြန့်သော PFC လှုပ်ရှားမှုအားပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာချိန်တွင်ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြင့်အစားထိုးသည်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သော PFC ၏အခန်းကဏ္ roles သည်တစ် ဦး ချင်းအားအကျိုးမပြုသည့်လုပ်ရပ်များကိုရပ်ဆိုင်းရန်ချုပ်တည်းခြင်း (စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်တားဆီးထိန်းချုပ်မှု)၊ ရည်မှန်းချက် - မောင်းနှင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သောစိတ်ခွန်အားနိုးမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အပြုအမူများနှင့် Self- အသိအမြင်။ PFC ဒေသများအကြားလှုပ်ရှားမှုသည်အလွန်အမင်းပေါင်းစည်း။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော်လည်းမည်သည့်ဒေသမဆိုလုပ်ဆောင်မှုများစွာတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိနိုင်သော်လည်း dorsal PFC (dACC, DLPFC နှင့်ယုတ်ညံ့ frontal gyrus အပါအ ၀ င်) သည်အပေါ်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် meta-cognitive လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် , ventromedial PFC (subgenual ACC နှင့် mOFC အပါအဝင်) စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများတွင် (မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များအေးစက်ခြင်းနှင့်တာဝန်ပေးအပ်အပါအဝင်), နှင့် ventrolateral PFC နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် OFC အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုသဘောထားတွေနဲ့ Impulsivity အတွက်ဇယား 1 ။ ဤအ PFC ဒေသများ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုတဏှာ၏တွန်းအား, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့် '' ငြင်းပယ် '' နှင့်ကုသမှုလိုအပ်ချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည် - မူးယစ်ဆေးစွဲ၏လက္ခဏာလက္ခဏာများ။ ဤသည် PFC ကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့သောအခြေအနေများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမတိုင်မီနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်အားနည်းချက်ရှိစေနိုင်သည် (Box 3) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၏လမ်းကြောင်းကိုဤတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် neuroimaging လေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည်တိကျသော biomarkers များသည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြံပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤ PFC မူမမှန်များကိုပြင်းထန်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုတားဆီးရေးကြိုးပမ်းမှုများမှအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်မည့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားဖော်ထုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဆေးဝါးများသည်ဤလိုငွေပြမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစွဲလမ်းသူများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုသမှုတွင်ပါ ၀ င်စေနိုင်သည်။
ထောင့်ကွက်3| မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအားနည်းချက်များနှင့်ဓာတ်
ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှု, မိသားစုသမိုင်းသို့မဟုတ်ရှေးခယျြဗီဇ polymorphic နှင့်၎င်းတို့၏ interaction ကအဖြစ် - - Pre-နေကြလို့ပဲအားနည်းချက်များမည်သို့လေ့လာရေး prefrontal cortex (PFC) function ကို impact အနာဂတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကာကွယ်တားဆီးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ဒီဇိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါပါ၏ ဒီလေ့လာမှုတွေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲမှအားနည်းချက်၏ရှင်းလင်းသော biomarkers ပစ်မှတ်ထား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဥပမာအားဖြင့်, အကြွင်းမဲ့အာဏာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု (CBF) (-10%) သို့လျှော့ချ, နှင့် dorsolateral PFC (DLPFC) (9%) နှင့် anterior cingulate cortex (ACC) (12%) အတွက်ဆွေမျိုး CBF တိုးမြှင်မိုးသည်းထန်စွာနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းထိတွေ့မှု201။ တစ်ဦးက hyperactive PFC လည်း MDMA ၏ငယ်ရွယ်အသုံးပြုသူများကအစီရင်ခံခဲ့သည်202, ဆေးခြောက်203 သို့မဟုတ်အရက်204 သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေရာအတွက် go / မသွားလာရင်းတာဝန်, (စဉ်အတွင်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S6 (ဇယား)) ။ အလားတူပဲအရက်မိဘများခဲ့ပေမယ့်ဒဏ်ခံခဲ့ကြတဲ့သူကလေးများနှင့်ကလေးများထိန်းချုပ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရက်မိဘများနှင့်အရက်အားနည်းချက်ဖြစ်နှင့်သောကလေးများ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သင်တန်းကျော်သောက်သုံးပြဿနာများ၏အဆင့်အပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြား) သောက်သုံးခြင်း, နေစဉ် hyperactive ညာဘက် dorsomedial PFC ခဲ့ နှစ်နိုင်ငံ orbitofrontal cortex (OFC) တိတ်တဆိတ်စိတ်ခံစားမှုစကားများဖတ်နေသည့်အခါအမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်း hypoactive ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုလုံးကိုနမူနာကိုဖြတ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သော dorsomedial PFC hyperactivity ပိုပြီး externalizing ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်205 (နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S5 (ဇယား)) ။ ထို့ကြောင့် PFC လှုပ်ရှားမှုထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများ (ညီမျှတာဝန်စွမ်းဆောင်မှုများကသက်သေအဖြစ်) ကိုရေတိုရေရှည်အတွက်အစားထိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်, သို့သော်ဤစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ရေရှည်အတွက်အဲဒီတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
စွဲပြောင်းလဲ dopaminergic neurotransmission ပါဝင်နိုင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, တို့အားဤသို့သောအားနည်းချက်အခြေခံ, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေးအပ်ကြောင်းအဆိုပါယန္တရား။ ဥပမာအားဖြင့်, striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဒေသတွင်း PFC ဇီဝြဖစ်လေ့စွဲတစ်ဦးချင်းစီ (အစီရင်ခံရလဒ်များကိုမှဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော, ထိုကဲ့သို့သောမိသားစုသမိုင်းမပါဘဲဘာသာရပ်များအတွက်ထက်အရက်မိသားစုများ၏နုပျို, ထိခိုက်အင်္ဂါများ၌ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြထောင့်ကွက် 2; မြင် နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် S7 (ဇယား))206။ အရက်အလွဲသုံးစားမှုတစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအနိမ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအစီရင်ခံ, ဤအောက်ပိုင်း striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း OFC ဇီဝြဖစ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီမည်သို့ပင်ဆိုစေကျန်းမာတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဆင့်ကိုအောကျတှငျကနျြရပေမယ့် - - မြင့် dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုတစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် PFC အတွက်တိုးမြှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုရဲ့အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်အဆင့်ဆင့်မှရှိစေခြင်းငှါ စွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဆန့်ကျင်သောဤလူတစ်ဦးချင်းစီကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးအခြေအနေများထိုကဲ့သို့သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတှကျလိုအပျကွောငျးလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်, ပြုလုပ် suboptimal အခြေအနေများ (ဥပမာ, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု) ဤအတူတူတစ်ဦးချင်းစီအသက်တာ၌အကြာတွင် addiction မှဖော်ထုတ်သို့သော်ဤ longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခံရဖို့ကျန်ရှိနေဆဲနိုင်ဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက် dysmorphology ကဲ့သို့သောအခြားယန္တရားများ,207လည်းစွဲမှအားနည်းချက်ဆွေးနွေးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။
စွဲမှအားနည်းချက်မှမျိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများလည်းအရေးကြီးလှသည်။ ဥပမာ, cannabinoid အဲဒီ receptor 1 (CB1) ဝှက်ကြောင်းဗီဇ၏အန္တရာယ် alleles ဒါမှမဟုတ်ဖက်တီးအက်ဆစ်အမိုင်နို hydrolase နှင့်အတူပုံမှန်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများက 1 (FAAH; endogenous cannabinoids metabolizes သောအင်ဇိုင်း) limbic PFC ဒေသများရှိ သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေး-related cue reactivity ကိုရှိခဲ့တယ်208။ အရေးကြီးတာက, ပတ်ဝန်းကျင် interaction ကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဗီဇအနာဂတ်မဲ့ဖြစ်စေသည်အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျန်းမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုအတွက် 1 နှစ်တိုးအစားအစာ-related တွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင်ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC ၏ activation အားဖြင့်ခန့်မှန်းပေမယ့်ကိုသာ dopaminergic အန္တရာယ် alleles dopamine အဲဒီ receptor D4 (များ၏သယ်ဆောင်အတွက်နိုင်DRD4) 7-ထပ် allele ဒါမှမဟုတ် DRD2 TaqIA A1 allele209။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အပါအဝင် - - မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ OFC ဖှံ့ဖွိုးတိုးလွှမ်းမိုးနိုင်သည်မကြာမီကလေ့လာမှုများလည်းအချို့သော polymorphic နှင့်မိသားစုများအကြားအပြန်အလှန်ကြောင်းအကြံပြု210, 211။ ဥပမာအားဖြင့်, လတ်တလောလေ့လာမှု medial OFC (mOFC) မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကိုဤဗီဇ၏အနိမ့်လှုပ်ရှားမှုမူကွဲအဆိုပါ mOFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လျော့ကျမောင်းထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, တစ်ဦးက genotype oxydase အဆိုပါ monoamine အားဖြင့် modulated ခံခဲ့ရကွောငျးဖျောပွခဲ့212, ဤမဟုတ်တော့တစ်သက်တာကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
Rita Z. Goldstein ၏ပင်မစာမျက်နှာ
•ယင်း Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း Neuropsychoimaging Group မှပင်မစာမျက်နှာ
•တက္ကသိုလ်ကော်လိုရာဒို၏ CANLab ဆော့ဝဲက်ဘ်ဆိုက်
ဤလေ့လာမှုကိုအမေရိကန်အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအင်စတီကျု (RZG မှ R01DA023579)၊ Inamamural NIAAA အစီအစဉ်နှင့်စွမ်းအင် ဦး စီးဌာန၊ ဇီဝဗေဒနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသုတေသနရုံး (အခြေခံအဆောက်အအုံအထောက်အပံ့အတွက်) မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ပုံ ၂ ပုံဒီဇိုင်းတွင် AB Konova ၏ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မှတ်ချက်များကိုအလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပြီးမူရင်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏တည်းဖြတ်မှုကိုလမ်းညွှန်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်သူများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
1 ။ ပညာရှိစွဲ၏ RA Neurobiology ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol.6, 243-251 (1996) ။
ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI ဏ
2. Everitt, BJ, Dickinson, A. & Robbins, TW စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံ။ Brain Res ။ Brain Res ။ Rev.36, 129-138 (2001) ။
၃။ Di Chiara, G. & Imperato, A. လူသားများအလွဲသုံးစားပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် mesolimbic ကြွက်များ၏လွတ်လပ်စွာရွေ့လျားသည့်ကြွက်များတွင် synaptic dopamine ပါဝင်မှုကိုပိုမို ဦး စားပေးသည်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ USA3, 85-5274 (5278) ။
4. Volkow, ND & Fowler, JS စွဲလမ်းမှု၊ မောင်းနှင်အားနှင့်ရောဂါတစ်ခု။ orbitofrontal cortex ပါ ၀ င်မှု။ Cereb ။ Cortex10, 318-325 (2000) ။
(၅) ရော်ဘင်ဆင်၊ တီ၊ ဂိုနီ၊ ဂျီ၊ မစ်တန်၊ အီးနှင့်ကောဘ၊ ခကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသည်နျူကလိယ၌နစ်ဒရိုက်နှင့်ဒန်းဒရစ်၏ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ၏နက္ခတ်ဗေဒင်ကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ Synapse5, 39-257 (266) ။
6. Robinson, TE & Kolb, B. အမ်ဖက်တမင်းသို့မဟုတ်ကိုကင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုခံယူပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုများ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci.11, 1598-1604 (1999) ။
၇။ Goldstein, RZ & Volkow, ND မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့် ၄ င်း၏နောက်ကွယ်မှ neurobiological အခြေခံ။ frontal cortex ပါ ၀ င်မှုအတွက် neuroimaging အထောက်အထား။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry7, 159-1642 (1652) ။
၈။ Volkow, ND, Fowler, JS & Wang, GJ စွဲလမ်းနေသောလူ့ ဦး နှောက် - ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ ဂျေ Clin ။ Invest.8, 111-1444 (1451) ။
9. Volkow, ND & Li, TK မူးယစ်ဆေးစွဲ: အပြုအမူ၏ neurobiology awry သွားပြီ။ Nature Rev Neurosci.5, 963-970 (2004)
၁၀။ Schoenbaum, G. , Roesch, MR, Stalnaker, TA & Takahashi, YK လိုက်လျောညီထွေသောအပြုအမူများတွင် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ on အပေါ်ရှုထောင့်သစ်။ သဘာဝ Rev Neurosci.10, 10-885 (892) ။
၁၁။ Mansouri, FA, Tanaka, K. & Buckley, MJ ပConိပက္ခ - ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု - prefrontal cortex ၏အလုပ်အမှုဆောင်များကိုသဲလွန်စတစ်ခု။ သဘာဝဗျာ Neurosci.11, 10-141 (152) ။
12 ။ Kufahl, PR စနစ် et al ။ fMRI အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာစူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ Neuroimage28, 904-914 (2005) ။
13 ။ Kufahl, P. et al ။ တစ်ဦး functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: မျှော်လင့်စူးရှသောကိုကင်းမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုံ့ပြန်မှု modulates ။ Biol ။ Psychiatry63, 222-230 (2008) ။
14 ။ Volkow, ND et al ။ မျှော်လင့်ထားသည့်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့်ကင်းချိုးဖောက်စိတ်ကြွဆေး၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ Neurosci.23, 11461-11468 (2003) ။
ဒီလေ့လာမှုကတစ်ခုစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ pharmacological ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပေမယ့်အတိတ်၏ရုံ function ကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ, သွေးကြောသွင်း MPH အားဖြင့်သွေးဆောင်ဒေသတွင်းဦးနှောက်ကို Activation မူးယစ်ဆေးပေးထားသည့်အခါဘာသာရပ်များရှိသည်သောမြော်လင့်ခြင်းအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းပြသ အတွေ့အကြုံများနှင့်ဤ generate သောမျှော်လင့်ချက်များ။
၁၅။ Howell, LL, Votaw, JR, Goodman, MM & Lindsey, KP cortical အသက်သွင်းခြင်းနှင့်မျောက်မျောက်များတွင်မျိုးသုဉ်းစဉ်ကာလအတွင်းမျိုးပွားခြင်း။ Psychopharmacology15, 208-191 (199) ။
16 ။ Howell, ll et al ။ သတိမျောက်တွေကိုအတွက် positron ထုတ်လွှတ် tomography neuroimaging ကဆုံးဖြတ်ကင်း-သွေးဆောင်ဦးနှောက်ကို Activation ။ Psychopharmacology159, 154-160 (2002) ။
17. ဟင်နရီ, PK, Murnane, KS, Votaw, JR & Howell, LL ကိုကင်းသုံးစွဲမှု၏သမိုင်းနှင့်အတူမျောက်မျဉ်းများတွင်ကိုကာကိုလာ၏ ဦး နှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်သက်ရောက်မှုများ။ ဦး နှောက်ပုံရိပ် Behav.4, 212-219 (2010) ။
၁၈။ Ahmed, SH & Koob, GF မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအလယ်အလတ်မှအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသို့ပြောင်းလဲခြင်း - hedonic set point ပြောင်းလဲခြင်း။ Science18, 282-298 (300) ။
19 ။ Febo, အမ် et al ။ သတိကြွက်များ၏ mesocorticolimbic dopaminergic စနစ်ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို Imaging ။ ဂျေ neuroscience ။ Methods139, 167-176 (2004) ။
20 ။ Mandeville, JB- et al ။ မျောက်များအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး FMRI Basal ganglia ၏အလုပ်လုပ်တဲ့တားစီးဖော်ပြသည်။ Neuropsychopharmacology36, 1187-1198 (2011) ။
21 ။ Zubieta, JK et al ။ နေ့ချင်းညချင်းနေကြပြီးဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်ပေးဖို့ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုတုံ့ပြန်မှု။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry162, 567-577 (2005) ။
22 ။ , LA က et al ရောင်း။ cue နဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု opiate စွဲထဲမှာစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်နှင့်ဘိန်းဖြူ evoked ။ မူးယစ်ဆေးအရက် Depend.60, 207-216 (2000) ။
23 ။ ဒိုမီနို, EF et al ။ နိုးကျိန်းဝပ်ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပေါ်နီကိုတင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuroscience101, 277-282 (2000) ။
24 ။ Myrick, အိပ်ချ် et al ။ အရက်တွေကိုမှအရက်သမားနှင့်လူမှုရေးသောက်များတွင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု Differential: တဏှာမှဆက်ဆံရေးမျိုး။ Neuropsychopharmacology29, 393-402 (2004) ။
25 ။ က de Greck, အမ် et al ။ fMRI လေ့လာမှု abstinent-တစ်ဦးအရက်သမားအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်ညွှန်းစဉ်အတွင်းဆုလာဘ် circuitry အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp.30, 1691-1704 (2009) ။
cue- နှိုးဆွတွန်းအားများနှင့် anhedonia ၏ 26. Zijlstra, အက်ဖ်, Veltman, DJ သမား, Booij, ဂျေ, ဗန်ဒင် Brink, ဒဗလျူ & Franken, IH Neurobiological အလွှာမကြာသေးမီက abstinent opioid- မှီခိုယောက်ျားအတွက် anhedonia ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် Depend.99, 183-192 (2009) ။
၂၇။ Yalachkov, Y. , Kaiser, J. & Naumer, MJ Brain ဒေသများသည်ကိရိယာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဗဟုသုတများသည်နီကိုတင်းမှီခိုမှုအားရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဂျေ Neurosci.27, 29-4922 (4929) ။
28 ။ Heinz, အေ ​​et al ။ အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းဦးနှောက်ကို Activation detoxified အရက်ဘာသာရပ်များအတွက် relapse တစ်နိမ့်အန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res.31, 1138-1147 (2007) ။
29 ။ Grusser, SM et al ။ Cue-သွေးဆောင်အဆိုပါ striatum ၏ activation နှင့် prefrontal cortex medial abstinent အရက်သမားအတွက်နောက်ဆက်တွဲ relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Psychopharmacology175, 296-302 (2004) ။
30 ။ Garavan, အိပ်ချ် et al ။ Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry157, 1789-1798 (2000) ။
ကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ထက် သာ. ကြီးမြတ် ACC activation သွေးဆောင်တစ်ဦးကိုကင်း-related ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်။ ဒီလေ့လာမှုကမူးယစ်စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်သဘာဝကျကျ evocative လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အလားတူ neuroanatomical အလွှာကိုသက်ဝင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
31 ။ Brody, AL et al ။ စီးကရက်တဏှာစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကို။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry59, 1162-1172 (2002) ။
32 ။ Artiges, အီး et al ။ တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားမှုအသိအမှတ်ပြုမှုတာဝန်စဉ်အတွင်းဆေးလိပ်သောက်တွေကိုထိတွေ့စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် limbic fMRI activation modulate နိုင်ပါတယ်။ စှဲလမျးသူ။ Biol.14, 469-477 (2009) ။
33 ။ Zhang က, X တို့မှာ et al ။ မျက်နှာဖုံးဆေးလိပ်သောက်-ဆက်စပ်ပုံရိပ်တွေဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု modulate ။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp.30, 896-907 (2009) ။
34 ။ Childress, AR et al ။ စိတ်အားထက်သန်မှုမှရှေ့ပွေးနိမိတျ: "မမွငျရသော" မူးယစ်ဆေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအားဖြင့် limbic activation ။ PLoS ONE3, e1506 (2008) ။
35 ။ Filbey, FM ရေ et al ။ အရက်၏အရသာကိုထိတွေ့သည့် mesocorticolimbic neurocircuitry ၏ activation elicits ။ Neuropsychopharmacology33, 1391-1401 (2008) ။
36 ။ မြို့ပြ, NB et al ။ [11C] raclopride အတူ positron ထုတ်လွှတ် tomography ပုံရိပ်လေ့လာမှု: ခံတွင်းအရက်စိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Biol ။ Psychiatry68, 689-696 (2010) ။
37. King, A. , McNamara, P. , Angstadt, M. & Phan, KL Neural အလွှာများသည်အရက်သေစာသောက်သုံးသူများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတွင်အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Neuropsychopharmacology35, 692-701 (2010) ။
38 ။ Volkow, ND et al ။ Orbital ၏ activation နှင့်ကိုကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် methylphenidate အားဖြင့် prefrontal cortex medial: စွဲမှဆီလျော်။ ဂျေ Neurosci.25, 3932-3939 (2005) ။
39 ။ ko, CH et al ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ဂျေ Psychiatric ။ Res.43, 739-747 (2009) ။
ရောဂါဗေဒကစားသမားအတွက် 40. Crockford, DN, Goodyear, ခ, Edwards က, ဂျေ, Quickfall, ဂျေ & el-Guebaly, N. Cue- သွေးဆောင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။ ဇီဝကမ္မ။ Psychiatry58, 787-795 (2005) ။
41. Goudriaan, AE, De Ruiter, MB, Van Den Brink, W. , Oosterlaan, J. & Veltman, DJ Brain ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများသည် cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်စွဲဆောင်သောပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုများတွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ fMRI လေ့လာမှု။ စှဲလမျးသူ။ Biol.15, 491-503 (2010) ။
42 ။ Reuters, ဂျေ et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သဘာဝတရား Neurosci.8, 147-148 (2005) ။
43 ။ Raichle, ME et al ။ ဦးနှောက် function ကိုတစ်က default mode ကို။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ USA98, 676-682 (2001) ။
စွဲခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းတွင်အာရုံခံဆားကစ်များထပ်နေခြင်း - စနစ်ရောဂါဗေဒ၏သက်သေသာဓက။ ၄၄ ။ Volkow, ND, Wang, GJ, Fowler, JS & Telang, F. Phil ။ ဖြတ်ကျော် R. Soc ။ Lond ။ B Biol ။ Sci.44, 363-3191 (3200) ။
45 ။ ဝမ်, GJ et al ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ Lancet.357, 354-357 (2001) ။
46 ။ Uher, R. et al ။ မမှန်စားလက္ခဏာဒေါသနဲ့ဆက်စပ် Medial prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှု။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry161, 1238-1246 (2004) ။
47 ။ Miyake, Y. et al ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု: အစာစားခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူလူနာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုရည်မှတ်အနုတ်လက္ခဏာစကားလုံးလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့။ Neuroimage50, 1333-1339 (2010) ။
48 ။ Culbertson, CS et al ။ ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်စီးကရက်-related တွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင်ဦးနှောက်ကို Activation အပေါ် bupropion ကုသမှု effect ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry68, 505-515 ။
49 ။ Franklin, T. et al ။ cue-ဖြစ်ပေါ်အာရုံကြောနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုဆေးလိပ်အပေါ် varenicline ၏ဆိုးကျိုးများ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry68, 516-526 ။
50 ။ ဝမ်, Z. et al ။ နာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် abstinence-သွေးဆောင်စီးကရက်မတရားသော၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ ဂျေ Neurosci.27, 14035-14040 (2007) ။
51 ။ Jane, AC အ et al ။ တိုးချဲ့ဆေးလိပ်သောက် abstinence မီနှင့်ကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်-ဆက်စပ်ပုံရိပ်တွေမှဦးနှောက် fMRI reactivity ကို။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol.17, 365-373 (2009) ။
52. McClernon, FJ, Kozink, RV, Lutz, AM & Rose, JE ၂၄ နာရီဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည် ဦး နှောက် cortex နှင့် dorsal striatum ရှိဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများအတွက် fMRI-BOLD ကိုအားဖြည့်စေသည်။ Psychopharmacology24, 204-25 (35) ။
53. McBride, D. , Barrett, SP, Kelly, JT, Aw, A. & Dagher, A. စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောတုန့်ပြန်ခြင်းအပေါ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology31, 2728-2738 (2006) ။
54. Wilson, SJ, Sayette, MA, Delgado, MR & Fiez, JA ညွှန်ကြားထားသည့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်သည် cue-elicited အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကို modulates: ပဏာမလေ့လာမှု။ နီကိုတင်း Tob Res.7, 637-645 (2005) ။
55 ။ Volkow, ND et al ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏သိမှုထိန်းချုပ်ရေးကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Neuroimage49, 2536-2543 (2010) ။
ဒီလေ့လာမှုကကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးတဏှာဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားသည့်အခါ, ဒီပြောင်းပြန် inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အဓိကဒေသဖြစ်သည့်လက်ျာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex (Brodmann ဧရိယာ 44) ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်း limbic ဦးနှောက်ဒေသတားစီးမှုကြောင့်ပြသထားတယ်။
56 ။ Brody, AL et al ။ စီးကရက် cue ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းတဏှာခုခံ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ Biol ။ Psychiatry62, 642-651 (2007) ။
57 ။ Kober, အိပ်ချ် et al ။ Prefrontal-striatal လမ်းကြောင်းတဏှာ၏သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းအခြေခံ။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ USA107, 14811-14816 (2010) ။
စားသုံးစီးကရက်၏ရေရှည်အကျိုးဆက်များစဉ်းစားနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်တဏှာယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်တဏှာနဲ့ဆက်စပ် PFC ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ် PFC ဒေသများတွင်တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ ဒီလေ့လာမှုက cue-သွေးဆောင်တဏှာလျှော့ချဖို့တိကျတဲ့သိမြင်-အပြုအမူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပေးထားပါတယ်။
အလိုဆန္ဒ၏ 58. Pelchat, ML, ဂျွန်ဆင်, အေ, ချမ်း, R. , Valdez, ဂျေ & Ragland, JD ပုံများ: fMRI စဉ်အတွင်းအစားအစာ - တဏှာ activation ။ Neuroimage23, 1486-1493 (2004) ။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် ၅၉. Volkow, ND, Fowler, JS, Wang, GJ & Swanson, JM Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာခြင်းနှင့်ကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှရလဒ်များ။ mol ။ Psychiatry59, 9-557 (569) ။
60. Koob, GF & Le Moal, အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ် dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology24, 97-129 (2001) ။
61. Solomon, RL & Corbit, JD ပြိုင်ဘက် - လုပ်ငန်းစဉ်၏လှုံ့ဆော်မှုသီအိုရီ။ ထိခိုက်မှု၏ဗြဲယာယီဒိုင်းနမစ်။ စိတ်ရောဂါ။ Rev.81, 119-145 (1974) ။
62. Solomon, RL & Corbit, JD လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်သီအိုရီ။ ၂ ။ စီးကရက်စွဲ။ ဂျေ Abnorm ။ Psychol.81, 158-171 (1973) ။
63 ။ Rolls, ဦးနှောက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ ET Precis ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Sci.23, 177-191; ဆွေးနွေးမှု 192-233 (2000) ။
64 ။ စယ်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးမူတည်အတွက်အမ် (ed ။ Edwards က, G. အ) 182-187 (Lexington စာအုပ်များ, 1976) ။
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက် 65. Gold, MS: တစ် ဦး ပြည့်စုံဖတ်စာအုပ် (eds Lowinson, JH, Ruiz, P. , Millman, RB & Langrod, JG) 181-199 (Williams & Wilkins, 1997) ။
66. Cheetham, A. , Allen, NB, Yucel, M. & Lubman, DI မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အခန်းကဏ္။ ။ Clin ။ စိတ်ရောဂါ။ Rev.30, 621-634 (2010) ။
67 ။ Sinha, R. စွဲ relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Curr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Rep.9, 388-395 (2007) ။
ကြားနေ၊ အပြုသဘောဆောင်သော၊ အပြုသဘောဆောင်သောရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့နေသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများတွင်စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံ 68 Aguilar de Arcos, F. , Verdejo-Garcia, A. , Peralta-Ramirez, MI, Sanchez-Barrera, M. & Perez-Garcia, M. အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်လှုံ့ဆော်မှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် Depend.78, 159-167 (2005) ။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကာလအတွင်းပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှီခိုနေရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Verdejo-Garcia, A. , Bechara, အေ, Recknor, EC & Perez-Garcia, M. အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု - စွဲခြင်း၏အမူအကျင့်၊ သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဂျေ Int ။ Neuropsychol ။ Soc.69, 12-405 (415) ။
70 ။ စတိန်း, RZ et al ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်? Am ငွေကြေးဆုလာဘ်မှ prefrontal cortical sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ ဂျေ Psychiatry164, 43-51 (2007) ။
ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ငွေကြေးဆုလာဘ်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာရုံခံ activation ပုံစံနှင့်ဆက်စပ်သော်လည်းမကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှုကိုကင်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်း Self-အသိအမြင်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်းရလဒ်များကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
71 Tremblay, အယ်လ် & Schultz, မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်ဒဗလျူဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကို။ Nature398, 704-708 (1999) ။
လူသားများအတွက်ဘဏ္rewardာရေးဆုလာဘ်မှ striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် 72. Elliott သည် R. , Newman က, JL, Long, OA & Deakin, JF Differential တုံ့ပြန်မှုပုံစံများ: တစ် parametric အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ဂျေ Neurosci.23, 303-307 (2003) ။
73. Breiter, HC, Aharon, I. , Kahneman,,, Dale, A. & Shizgal, Neural တုန့်ပြန်မှုများ၏ P. Functional ပုံရိပ်နှင့်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုတို့၏အတွေ့အကြုံ။ Neuron30, 619-639 (2001) ။
74. Kringelbach, ML, O'Doherty, J. , Rolls, ET & Andrews, C. လူသား၏ orbitofrontal cortex ကိုအရည်အစာလှုံ့ဆော်ရန်လှုံ့ဆော်မှုသည်၎င်း၏သာယာသာယာမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Cereb ။ Cortex13, 1064-1071 (2003) ။
ငွေကြေးဆိုင်ရာမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးအလုပ်ကာလအတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ 75 Knutson, ခ, Westdorp, အေ, Kaiser, အီး & Hommer, FM FMRI ။ Neuroimage12, 20-27 (2000) ။
လူ့ orbitofrontal cortex အတွက် 76. O'Doherty, ဂျေ, Kringelbach, ML, Rolls, ET, Hornak, ဂျေ & Andrews က, C. စိတ္တဇဆုလာဘ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စားပြု။ သဘာဝ Neurosci.4, 95-102 (2001) ။
77 ။ Hornak, ဂျေ et al ။ လူသားတွေအတွက် orbito-တိုကျရိုကျသို့မဟုတျ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်ခွဲစိတ်ယစ်မျိုးပြီးနောက်သင်ယူဆုလာဘ်-related မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်။ ဂျေ Cogn ။ Neurosci.16, 463-478 (2004) ။
78 ။ စတိန်း, RZ et al ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ gradients မှပုဂ္ဂလဒိဋ္ sensitivity ကိုကိုကင်းချိုးဖောက်ဆုချမှ frontolimbic activation နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက် Depend.87, 233-240 (2007) ။
Orbitofrontal cortex တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကို Roesch, MR, Taylor, AR & Schoenbaum, G. Encoding သည်တန်ဖိုးကိုယ်စားပြုမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ Neuron79, 51-509 (520) ။
80. Kirby, KN & Petry, NM ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းချိုးဖောက်သူများသည်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများထက်နှောင့်နှေးသောဆုလာဘ်များအတွက်အထူးလျှော့စျေးနှုန်းထားများရှိသည်။ စွဲ, 99-461 (471) ။
81 ။ Monterosso, JR et al ။ အလုပ်တခုကိုဝတဲ့နှောင့်နှေးဖျော်ဖြေစိတ်ကြွဆေး-မှီခိုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များ၏ Frontoparietal cortical လှုပ်ရှားမှု။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp.28, 383-393 (2007) ။
82. Kampman, KM ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုကိုကုသရာတွင်ဘာအသစ်လဲ။ Curr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Rep.12, 441-447 (2010) ။
83 ။ စတိန်း, RZ et al ။ ကိုကင်းစွဲတစ်ခုစိတ်ခံစားမှုအဓိကတာဝန်ဖို့ anterior cingulate cortex hypoactivations ။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ USA106, 9453-9458 (2009) ။
84 ။ စတိန်း, RZ et al ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာမူးယစ်ဆေးစကား Dopaminergic တုံ့ပြန်မှု။ ဂျေ Neurosci.29, 6001-6006 (2009) ။
85. Reichel, CM & Bevins, ကိုကင်းနှင့်အသစ်အဆန်း၏အခြေအနေကောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှု။ Behav ။ Neurosci.122, 140-150 (2008) ။
အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခု၏ JI နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ကာလတစ်လျှောက်တွင်ခွေးများနှင့်ကိုကင်းများ 86. Mattson, BJ, Williams, S. , Rosenblatt, JS & Morrell ။ Behav ။ Neurosci.115, 683-694 (2001) ။
87 ။ Zombeck ဂျေအေ et al ။ ကြွက်တွေမှာအစားအစာနှိုင်းယှဉ်ကင်းဖို့အခွအေနေတုံ့ပြန်မှု၏ Neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ Physiol ။ Behav.93, 637-650 (2008) ။
88. Aigner, TG & Balster, RL မျောက်မျောက်များတွင်အပြုအမူရွေးချယ်မှု - ကိုကင်းနှင့်အစားအစာတို့ဖြစ်သည်။ Science201, 534-535 (1978) ။
၈၉။ Woolverton, WL & Anderson, KG မျောက်များရှိကိုကင်းနှင့်အစားအစာအကြားရွေးချယ်မှုအပေါ်အားဖြည့်ရန်နှောင့်နှေးမှု၏နှောင့်နှေးမှု။ Psychopharmacolog.89, 186-99 (106) ။
90 ။ Buhler, အမ် et al ။ နီကိုတင်းမှီခိုလှုံ့ဆျောမှုကားမောင်းတဲ့ကွန်ယက် disorders ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ Biol ။ Psychiatry67, 745-752 (2010) ။
မှီခိုဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဤတုံ့ပြန်မှုနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်အမျိုးအစားများကိုတန်းတူခဲ့ကြသည်သော်လည်းရံဖန်ရံခါဆေးလိပ်သောက်, စီးကရက်ဆုလာဘ်သာရှိပြီးပြည်ပမှငွေကြေးခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုများနှင့် mesocorticolimbic reactivity ကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး-ဆုလာဘ်-ခန့်မှန်းမူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာတွေကိုခန့်မှန်းသည် non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်သာရှိပြီးပြည်ပမှမှစွပ်စွဲသည့်မက်လုံးပေး salience အတွက်မညီမမျှအကြံပြုထားသည်။
91 ။ Moeller, SJ et al ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာကိုကင်းဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအဘို့အ Enhanced ရွေးချယ်မှု။ Biol ။ Psychiatry66, 169-176 (2009) ။
92 ။ Moeller, SJ et al ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်: ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Brain.133, 1484-1493 (2010) ။
93 ။ Kim က, YT et al ။ fMRI လေ့လာမှု: တစ်ဦးစာနာမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေအထီးစိတ်ကြွဆေးအချိုးဖောက်ဆုံး cortical လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ALTER ။ Hum ။ Psychopharmacol.25, 63-70 (2010) ။
94 ။ ဝမ်, ZX et al ။ abstinent ဘိန်းဖြူစွဲထဲမှာ Non-မူးယစ်ဆေး-related ထိခိုက်စေလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် ALTER ။ Neuroimage49, 971-976 (2010) ။
95 ။ Salloum, JB- et al ။ အရက်လူနာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေတစ်ရိုးရှင်းသောဒီကုဒ်ဒါလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်း rostral anterior cingulate တုံ့ပြန်မှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res.31, 1490-1504 (2007) ။
96 ။ Asensio, အက်စ် et al ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု: ကိုကင်းစွဲထဲမှာအစာစားချင်စိတ်စိတ်ပိုင်းစနစ်၏ပြောင်းလဲအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ စှဲလမျးသူ။ Biol.15, 504-516 (2010) ။
ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်သူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတုန့်ပြန်မှု - FMRI လေ့လာချက် 97. Gruber, SA, Rogowska, J. & Yurgelun-Todd, DA အပြောင်းအလဲရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် Depend.105, 139-153 (2009) ။
98 ။ အခွန်ဆောင်သူ, DE et al ။ တစ်ဦးမျက်နှာကိုထိခိုက်ကိုက်ညီတာဝန်ဖျော်ဖြေစိတ်ကြွဆေး-မှီခိုကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအကြား cortical လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွာခြားချက်များ။ မူးယစ်ဆေးအရက် Depend.93, 93-102 (2008) ။
ကြွက်များတွင်စွဲကဲ့သို့အပြုအမူများအတွက် 99. Deroche-Gamonet, V. , Belin, & & Piazza, PV အထောက်အထား။ Science305, 1014-1017 (2004) ။
100 ။ က de Ruiter, ကို MB et al ။ တုန့်ပြန်ဇွဲနှင့်ဆုချခြင်းနှင့်အထီးပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် ventral prefrontal sensitivity ကို။ Neuropsychopharmacology34, 1027-1038 (2009) ။
101 ။ စတိန်း, RZ et al ။ ကိုကင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အလေ့အကျင့်၏အကျိုးသက်ရောက်။ Neuroimage35, 194-206 (2007) ။
102 ။ စတိန်း, RZ et al ။ ကိုကင်းနှင့်အရက်စွဲအတွက် neuropsychological ချို့ယွင်း၏ပြင်းထန်မှု: အ prefrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ Neuropsychologia42, 1447-1458 (2004) ။
103. Garavan, အိပ်ချ် & Hester, R. ကိုကင်းမှီခိုအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ Neuropsychol ။ Rev.17, 337-345 (2007) ။
104. Aharonovich, အီး, Nunes, အီး & Hasin, D. သိမှု - အပြုအမူကုသမှုအတွက်ကိုကင်းချိုးဖောက်သူများအကြား imp သိမြင်မှုချို့ယွင်း, retention ကိုနှင့် abstinence ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် Depend.71, 207-211 (2003) ။
105 ။ Aharonovich, အီး et al ။ သိမှုလိုငွေပြမှုကိုကင်းမှီခိုလူနာအတွက်အနိမ့်ကုသမှု retention ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မူးယစ်ဆေးအရက် Depend.81, 313-322 (2006) ။
106. Goldstein, RZ, Moeller, SJ & Volkow, ND ။ အဆိုပါစွဲအတွက် Neuroimaging (eds Adinoff, B. & Stein, EA) (Weily, 2011) ။
107 ။ Tarter, RE et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် Neurobehavioral disinhibition ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါစတင်ခြင်းမှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry160, 1078-1085 (2003) ။
108 ။ Moffitt, TE et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးက gradient ကိုကျန်းမာရေး, စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ USA108, 2693-2698 (2011) ။
ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့်ဖော်ပြအဖြစ် 109. Kaufman, JN, Ross, TJ, Stein, EA & Garavan, အိပ်ချ် Cingulate hypoactivity တစ် GO-NOGO တာဝန်စဉ်အတွင်း။ ဂျေ Neurosci.23, 7839-7843 (2003) ။
110. Hester, R. & Garavan, အိပ်ခ်ျအက်စ်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု: စိတ်တိုးပွား frontal, cingulate နှင့် cerebellar လှုပ်ရှားမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ ဂျေ Neurosci.24, 11017-11022 (2004) ။
111 ။ ဖူ, LP သို့ et al ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု: abstinent ဘိန်းဖြူမှီခိုအတွက်တုန့်ပြန်တားစီး function ကိုအာရုံချို့ယွင်း။ neuroscience ။ Lett.438, 322-326 (2008) ။
112 ။ လီ, CS et al ။ အာရုံကြောကိုကင်း-မှီခိုအမျိုးသားများတွင်ရပ်တန့် signal ကိုတားစီးနေစဉ်အတွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuropsychopharmacology33, 1798-1806 (2008) ။
အရက်မှီခိုမှုအတွက် Li, CS, Luo, X တို့မှာ, ယန်, P. , Bergquist, K. & Sinha, R. Altered ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှု: မှတ်တိုင် signal ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏အာရုံကြောအစီအမံ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res.113, 33-740 (750) ။
114. Kozink, RV, Kollins, SH & McClernon, FJ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအားတားဆီးခြင်းသည်ညာဘက်ယုတ်ညံ့သည့် frontal cortex ကိုပြုပြင်သည်။ Neuropsychopharmacology35, 2600-2606 (2010) ။
115. Leland, DS, Arce, E. , Miller, DA & Paulus, အမတ် Anterior cingulate cortex နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးအပေါ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း cueing ၏အကျိုးကျေးဇူး။ ဇီဝကမ္မ။ Psychiatry63, 184-190 (2008) ။
သတင်းအချက်အလက် cueing တစ်သွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go task ထဲမှာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင်, ဤစိတ်ကြွဆေး-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုကောင်း ACC activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကစွဲလမ်းအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်မယ့်တိကျတဲ့သိမြင်-အပြုအမူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပေးထားပါတယ်။
116 ။ Stroop, အမှတ်စဉ်နှုတ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်နှောင့်အယှက်များ JR လေ့လာရေး။ ဂျေ Exp ။ Psychol.18, 643-662 (1935) ။
117. Leung, HC, Skudlarski, P. , Gatenby, JC, Peterson, BS & Gore, JC အဆိုပါ stroop အရောင်စကားလုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတာဝန်တစ်ခုဖြစ်ရပ် -related အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ Cereb ။ Cortex.10, 552-560 (2000) ။
118. Pardo, JV, Pardo, PJ, Janer, KW & Raichle, ME The anterior cingulate cortex သည် Stroop ၏အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာပconflictိပက္ခပုံစံ၏အပြောင်းအလဲရွေးချယ်ခြင်းကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ USA87, 256-259 (1990) ။
119 ။ ခုံတန်းလျား, CJ et al ။ အဆိုပါ Stroop စမ်းသပ်သုံးပြီးအာရုံစိုက်မှုများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ Neuropsychologia31, 907-922 (1993) ။
120. Carter က, CS & ဗန် Veen, V. Anterior cingulate cortex နှင့်ပconflictိပက္ခထောက်လှမ်း: သီအိုရီနှင့်အချက်အလက်များ၏ update ကို။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Behav ။ Neurosci.7, 367-379 (2007) ။
121 ။ Bolla, K. et al ။ abstinent ကင်းချိုးဖောက် Prefrontal cortical ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဂျေ Neuropsychiatry Clin ။ Neurosci.16, 456-464 (2004) ။
abstinent ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင် prefrontal ဦး နှောက်ဒေသများရှိ ၁၂၂ Eldreth, DA, Matochik, JA, Cadet, JL & Bolla, KI ပုံမှန်မဟုတ်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။ Neuroimage122, 23-914 (920) ။
123. Salo, R. , Ursu, အက်စ်, Buonocore, MH, Leamon, MH & Carter က, C. prefrontal cortical function ကိုချို့ယွင်းခြင်းနှင့် methamphetamine အလွဲသုံးစားမှုအတွက်သပ္ပါယ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှောင့်အယှက်: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ဇီဝကမ္မ။ Psychiatry65, 706-709 (2009) ။
124 ။ Azizian, အေ et al ။ ဆေးလိပ်တစ် stroop တာဝန်ဖျော်ဖြေ abstinent စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ပဋိပက္ခ-related anterior cingulate လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology35, 775-782 (2010) ။
အူကြောင်ကြောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဘရူနာ၊ ဂျေအေ၊ Worhunsky၊ PD၊ ကာရိုး၊ KM၊ Rounsaville၊ BJ & Potenza၊ MN ကြိုတင်ကုသမှု ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းမှာကိုကင်းမှမှီခိုသောလူနာများ၏ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဇီဝကမ္မ။ Psychiatry125, 64-998 (1004) ။
126 ။ Ersche, KD et al ။ လှုံ့ဆော်မှီခိုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ dopaminergic မော်ဂျူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု compulsive ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry67, 632-644 (2010) ။
Stimulant-dependant တစ် ဦး ချင်းစီသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စကားလုံးများအတွက်ဂရုပြုဘက်လိုက်မှုကိုသရုပ်ပြပြီးလက်ဝဲ prefrontal cortex ၏ cue-related activation နှင့်ဆက်နွယ်နေခဲ့သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုလှုံ့ဆော်အလွဲသုံးစားမှု၏အလွန်အမင်း compulsive ပုံစံများနှင့်အတူလူ၌သာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုက dopaminergic စိန်ခေါ်မှုများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဦး နှောက်ကိုသက်ရောက်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏အခြေခံ compulsivity အဆင့်ပေါ်မူတည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
127 ။ Luijten, အမ် et al ။ ဆေးလိပ်သောက် related အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏ Neurobiological အလွှာဟာ။ Neuroimage54, 2374-2381 (2010) ။
128 ။ Jane, AC အ et al ။ ဆေးလိပ်သောက်-related တွေကိုအဘို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏အာရုံကြောအလွှာ: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology35, 2339-2345 (2010) ။
129 ။ စတိန်း, RZ et al ။ အဆိုပါ anterior cingulate ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုကင်းစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို processing အတွက် orbitofrontal cortex medial ။ Neuroscience144, 1153-1159 (2007) ။
ဂျွန်၊ ဂျေ၊ ကလဲစီ၊ အယ်လ်နှင့်ဂါရာဗန်၊ အိပ်ချ်။ အောက်မှအပေါ်စီးနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်“ အထက်မှအောက်သို့” အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကွာခြားချက်များ - သက်သေသာဓက ၁၃၀။ Nestor, L. , McCabe, အီး၊ ဂျုံးစ်၊ တိုးမြှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်နီကိုတင်း abstinence မြှင့်တင်ရန်စေခြင်းငှါအရာအာရုံကြောအလွှာ။ Neuroimage130, 56-2258 ။
131 ။ Khantzian, EJ စွဲလမ်းပုံမမှန်ခြင်း၏ Self-ဆေးဝါးအယူအဆ: ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းမှီခိုအာရုံစိုက်ပါ။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry142, 1259-1264 (1985) ။
132 ။ Khantzian, EJ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်း၏ Self-ဆေးဝါးအယူအဆ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးအတွက်နှင့်မကြာသေးမီက applications များ။ Harv ။ ဗျာ Psychiatry4, 231-244 (1997) ။
133 ။ Langleben, DD et al ။ ဘိန်းဖြူ-related တွေကိုမှဦးနှောက် FMRI တုံ့ပြန်မှုအပေါ် methadone ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထိုး၏ acute အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry.165, 390-394 (2008) ။
134. Garavan, အိပ်ချ်, Kaufman, JN & Hester, ကိုသိ၏ထိန်းချုပ်မှု၏ neurobiology အပေါ်ကိုကင်း၏ R. Acute ဆိုးကျိုးများ။ Phil ။ ဖြတ်ကျော် R. Soc ။ Lond ။ B Biol ။ Sci.363, 3267-3276 (2008) ။
135 ။ လီ, CS et al ။ ကိုကင်း-မှီခိုလူနာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်အောင်အပေါ်သွေးကြောသွင်း methylphenidate ၏သက်ရောက်မှု၏ဇီဝဗေဒအမှတ်အသားများ။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ USA107, 14455-14459 (2010) ။
136 ။ Volkow, ND et al ။ Methylphenidate ကင်းချိုးဖောက်ကင်း-တွေကိုထိတွေ့ပြီးနောက် limbic ဦးနှောက်တားစီး attenuates ။ PLoS ONE5, e11509 (2010) ။
137 ။ စတိန်း, RZ et al ။ ခံတွင်း methylphenidate တစ်ဦးအဓိကသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်းကင်းစွဲအတွက် cingulate လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ USA107, 16667-16672 (2010) ။
ခံတွင်း MPH တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-သက်ဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှု Stroop task ထဲမှာ Impulse လျော့နည်းသွား, ဤကျဆင်းခြင်းကိုကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် rostroventral ACC (ထို mOFC မှသက်တမ်းတိုးရေး) နှင့် dACC အတွက် activation ၏ပုံမှန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ပါးစပ် MPH ကိုကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သိမြင်မှု-အပြုအမူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်အောင်အတွက်ကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
138 ။ Adinoff, ခ et al ။ ကိုကင်း-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်ပြောင်းလဲအာရုံကြော cholinergic အဲဒီ receptor စနစ်များကို။ Neuropsychopharmacology35, 1485-1499 (2010) ။
139 ။ စတိန်း, RZ et al ။ မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏ neurocircuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ Sci.13, 372-380 (2009) ။
မျောက် orbitofrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက် 140. Reekie, YL, Braesicke, K. , Man, က MS & Roberts သည်, အမူအကျင့်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှု AC အ Uncoupling ။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ USA105, 9787-9792 (2008) ။
141 ။ စတိန်း, RZ et al ။ လက်ရှိကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှစိတ်မချရသော sensitivity ကို: တစ်ဦး ERP လေ့လာမှု။ Psychophysiology45, 705-713 (2008) ။
Chiu, PH, Lohrenz, TM & Montague, PR ဆေးလိပ်သောက်သူများ၏ ဦး နှောက်များသည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏မှားယွင်းသောအမှားအချက်ပြကိုတွက်ချက်သော်လည်းလျစ်လျူရှုသည်။ သဘာဝ Neurosci.142, 11-514 (520) ။
143. Rinn, ဒဗလျူ, Desai, N. , Rosenblatt, အိပ်ချ် & Gastfriend, DR စွဲငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဂျေ Neuropsychiatry Clin ။ Neurosci.14, 52-57 (2002) ။
144. Hester, R. , Nestor, L. & Garavan, H. ချို့တဲ့ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင်အမှားအသိအမြင်နှင့် anterior cingulate cortex hypoactivity ချို့ယွင်းချက်။ Neuropsychopharmacology34, 2450-2458 (2009) ။
ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကကော်မရှင်အမှားအယွင်းများ၏အသိအမြင်အတွက်လိုငွေပြမှုပြသခဲ့သည်, ဤသွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်အတွက် ACC နှင့်ညာဘက် insula အတွက် hypoactivity နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် interoceptive အသိအမြင်စောင့်ကြည့်အတွက် ACC နှင့် insula ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်လိုငွေပြမှုမှထောက်ပြသည်။
145. ပေးဆောင်သူ, DE, Lieberman, MD & London, methamphetamine မှီခိုမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သောအပြောင်းအလဲနှင့်ကျူးကျော်မှု၏ ED Neural ဆက်စပ်မှုများ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry.68, 271-282 (2010) ။
အဆိုပါ ventrolateral PFC စဉ်အတွင်းစိတ်ကြွဆေး-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်ကိုက်ညီထိခိုက်စေ hypoactive ခဲ့, ဤစိတ်ခံစားမှုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်စွဲထဲမှာကြီးထွားကျူးကျော်ကိုအထောက်အကူပြုရန်တစ်ယန္တရားမှညွှန်ပြပိုမို Self-အစီရင်ခံ alexithymia နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
146. ကင်မ်, JS et al ။ ကိုရီးယားအရက်မှီခိုသူအမျိုးသားများတွင်အရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၌အရက်သမားများထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏အခန်းကဏ္။ ။ ဂျေကိုရီးယား Med Sci.22, 132-137 (2007) ။
အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှု၏ D147. Dosenbach, NU, Fair, DA, Cohen, AL, Schlaggar, BL & Petersen, SE A dual-networks ဗိသုကာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ Sci.12, 99-105 (2008) ။
စနစ်များအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက် 148. Kriegeskorte, N. , Simmons, WK, Bellgowan, PS & Baker, CI မြို့ပတ်ရထားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: နှစ်ဆနှစ်၏အန္တရာယ်များ။ သဘာဝ Neurosci.12, 535-540 (2009) ။
ROI ကိုဆန်းစစ်လေ့လာရာတွင် Poldrack, RA & Mumford, JA Independence: voodoo ဘယ်မှာလဲ။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Neurosci.149, 4-208 (213) ။
150 ။ Biswal, BB et al ။ လူ့ဦးနှောက် function ကို၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသိပ္ပံဆီသို့။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ USA.107, 4734-4739 (2010) ။
နာတာရှည်ကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများအတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးမှု 151. Hanlon, CA, Wesley, MJ, Roth, AJ, Miller, MD & Porrino, LJ ၏အရှုံး - sensorimotor ထိန်းချုပ်မှု၏ fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res.181, 15-23 (2009) ။
152 ။ Kushnir, V. et al ။ နီကိုတင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ကျရောဂါပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ် Enhanced ဆေးလိပ်သောက် cue salience: တစ်ပဏာမ fMRI လေ့လာမှု။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol.7 ဇူလိုင်လ 2010 (Doi: 10.1017 / 51461145710000696) ။
153 ။ Woicik, PA ဆိုပြီး et al ။ ကိုကင်းစွဲ၏ neuropsychology: မကြာသေးမီကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမျက်နှာဖုံးများချို့ယွင်း။ Neuropsychopharmacology34, 1112-1122 (2009) ။
154. Dunning, JP et al ။ ERP ၏လေ့လာမှုမှာ abelstant နှင့်လက်ရှိကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင်ကိုကင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအချက်များကိုစိတ် ၀ င်စားသောအာရုံစူးစိုက်မှု။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci.33, 1716-1723 (2011) ။
155. Raichle, ME & Snyder, AZ ဦး နှောက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုပုံစံ - တိုးတက်နေသောအတွေးအခေါ်အကျဉ်း။ Neuroimage37, 1083-1090; ဆွေးနွေးမှု 1097-1089 (2007) ။
ကျိန်းဝပ် ဦး နှောက်အတွက် 156. Greicius, MD, Krasnow, ခ, Reiss, AL & Menon, V. အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု: ကို default mode ကိုအယူအဆတစ်ခုကွန်ယက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ USA100, 253-258 (2003) ။
157. ဟောင်ကောင်, LE et al ။ သီးခြား cingulate cortex အလုပ်လုပ်သောဆားကစ်များနှင့်နီကိုတင်းစွဲခြင်းနှင့်နီကိုတင်းဓာတ်ပြုခြင်းများဆက်စပ်ခြင်း။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry66, 431-441 (2009) ။
158 ။ ကိုးလ်, DM et al ။ abstinent ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်နီကိုတင်းအစားထိုးဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုဒိုင်းနမစ်အနားယူ၏မော်ဂျူနှင့်အတူသိမြင်မှုရုပ်သိမ်းလက္ခဏာတွေပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Neuroimage52, 590-599 (2010) ။
159 ။ Zhang က, X တို့မှာ et al ။ ဆေးလိပ်သောက် cue reactivity ကိုအခြေခံခန္ဓာဗေဒကွဲပြားမှုနှင့်ကွန်ယက်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ Neuroimage54, 131-141 (2011) ။
160 ။ Zhang က, X တို့မှာ et al ။ အချက်များနောက်ခံ prefrontal နှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် insula ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲ။ Neuroimage54, 42-48 (2011) ။
161 ။ Tomasi, ဃ et al ။ ကိုကင်းချိုးဖောက် dopaminergic midbrain နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်။ PLoS ONE5, e10815 (2010) ။
162 ။ Gu, အိပ်ချ် et al ။ ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုများကသရုပ်ပြအဖြစ် Mesocorticolimbic ဆားကစ်နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ချို့ယွင်းလျက်ရှိသည်။ Neuroimage53, 593-601 (2010) ။
163 ။ ဝမ်, ဒဗလျူ et al ။ ဘိန်းဖြူချိုးဖောက် ventral anterior cingulate cortex ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ ချင်းလူမျိုး။ Med ။ J.123, 1582-1588 (2010) ။
164 ။ Daglish, MR et al ။ opiate တဏှာ၏အာရုံကြောဆားကစ်၏ functional ဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: "ပိုပြီး" ထက် "မတူညီတဲ့" Neuroimage20, 1964-1970 (2003)? ။
165 ။ ယွမ်, K. et al ။ abstinent ဘိန်းဖြူ-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ကွန်ရက်များအပြောင်းအလဲများကိုစူးစမ်းဖို့ Spatial နှင့်ယာယီသတင်းအချက်အလက်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး။ neuroscience ။ Lett.475, 20-24 (2010) ။
166 ။ Fein, G. အ et al ။ ကုသမှု-နုံအရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စအရှုံး။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res.26, 558-564 (2002) ။
167 ။ Chanraud, အက်စ် et al ။ ဦးနှောက် morphometry နှင့်ထိန်းသိမ်းထားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ detoxified အရက်-မှီခိုအတွက်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို။ Neuropsychopharmacology32, 429-438 (2007) ။
168. Chanraud, အက်စ်, Pitel, AL, Rohlfing, တီ, Pfefferbaum, အေ & Sullivan က, EV အရက်သမားအတွက် Dual tasking နှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်: frontocerebellar circuitry နှင့်စပ်လျဉ်း။ Neuropsychopharmacology35, 1868-1878 (2010) ။
169 ။ Makris, N. et al ။ အရက်ထဲမှာဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်။ Biol ။ Psychiatry.64, 192-202 (2008) ။
170 ။ Wobrock, T. et al ။ အရက်ထဲမှာဦးနှောက် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အပေါ် abstinence ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ် MRI လေ့လာမှု။ အီးယူအာရ်။ Arch ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin ။ Neurosci.259, 143-150 (2009) ။
ဦး နှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအပေါ်ကိုကင်း၏ FS Effect: Narayana, PA, Datta, S. , Tao, G. , Steinberg, JL & Moeller, FG အကျိုးသက်ရောက်မှု - MRI volumetry ။ tensor-based morphometry ကိုအသုံးပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် Depend.171, 111-191 (199) ။
172 ။ Franklin, TR et al ။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စဟာနောက်ကျနေခဲ့သည်, orbitofrontal အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု, cingulate နှင့်ကိုကင်းလူနာယာယီ cortical လျော့နည်းသွားသည်။ Biol ။ Psychiatry51, 134-142 (2002) ။
abstinent ကိုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်အတွက် 173. Matochik, JA, လန်ဒန်, ED, Eldreth, DA, Cadet, JL & Bolla, KI Frontal cortical တစ်ရှူးဖွဲ့စည်းမှု: တစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage19, 1095-1102 (2003) ။
174 ။ sim, ME et al ။ Cerebellar မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကိုကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကြာချိန်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuropsychopharmacology32, 2229-2237 (2007) ။
175 ။ Schwartz, DL et al ။ မကြာသေးမီက abstinent စိတ်ကြွဆေး-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ morphometric ကွဲပြားခြားနားမှု။ Neuroimage50, 1392-1401 (2010) ။
176 ။ ယွမ်, Y. et al ။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆအနုတ်လက္ခဏာငယ်ရွယ်တစ်သက်တာဘိန်းဖြူ-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုကြာချိန်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဦးနှောက် Cogn.71, 223-228 (2009) ။
177 ။ Lyoo, Ik et al ။ Prefrontal နှင့်ယာယီမီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆ opiate မှီခိုအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology184, 139-144 (2006) ။
178 ။ လျူ, အိပ်ချ် et al ။ optimized voxel-based morphometry: ဘိန်းဖြူမှီခိုအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချရေးတိုကျရိုကျနှင့် cingulate ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin ။ Neurosci.63, 563-568 (2009) ။
179 ။ Brody, AL et al ။ ဒေသဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုနှင့်သိပ်သည်းဆဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေအကြားကွာခြားချက်များ။ Biol ။ Psychiatry55, 77-84 (2004) ။
180. Kuhn, အက်စ်, Schubert, အက်ဖ် & Gallinat, ဂျေဆေးလိပ်သောက်အတွက် medial orbitofrontal cortex ၏အထူလျှော့ချ။ ဇီဝကမ္မ။ Psychiatry68, 1061-1065 (2010) ။
181 ။ မက်ဒီနာ, KL et al ။ အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် Prefrontal cortex volumes ကို: ထူးခြားသောကျားဆိုးကျိုးများ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res.32, 386-394 (2008) ။
182 ။ မက်ဒီနာ, KL et al ။ သိမ်မွေ့ကျားသက်ရောက်မှု: abstinent ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက် Prefrontal cortex morphometry ။ စှဲလမျးသူ။ Biol.14, 457-468 (2009) ။
183 ။ Tanabe, ဂျေ et al ။ Medial orbitofrontal cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စ abstinent ပစ္စည်းဥစ္စာ-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိုလျှော့ချထားသည်။ Biol ။ Psychiatry65, 160-164 (2009) ။
184 ။ Volkow, ND et al ။ စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်: အ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry158, 2015-2021 (2001) ။
185 ။ Volkow, ND et al ။ detoxified အရက်သမားအတွက် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လေးနက်လျှောက်လျော့နည်း: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ Neurosci.27, 12700-12706 (2007) ။
186 ။ Volkow, ND et al ။ တတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးအချက်များ: အနိမျ့ dopamine striatal D2 receptors အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal ဇီဝြဖစ်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ Neuroimage42, 1537-1543 (2008) ။
187 ။ Asensio, အက်စ် et al ။ Striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတို့သည် thalamic ဟောကိန်းထုတ်သုံးနှစ်အကြာတွင်ကင်းချိုးဖောက်ဆုချမှ prefrontal တုံ့ပြန်မှု medial ။ Synapse64, 397-402 (2009) ။
188 ။ Fehr, C. et al ။ အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမြင်ကြကြောင်းအလားတူနီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူအနိမ့် striatal dopamine d2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏အသင်းမှ။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry165, 507-514 (2008) ။
189 ။ Narendran, R. et al ။ နာတာရှည်အပန်းဖြေ ketamine အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ပြောင်းလဲ prefrontal dopaminergic function ကို။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry162, 2352-2359 (2005) ။
190 ။ Martinez, ဃ et al ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: သိသိသာသာကင်းမှီခိုနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့ရှေးခယျြမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ နံနက်။ ဂျေ Psychiatry164, 622-629 (2007) ။
191 ။ Gorelick, DA et al ။ အချိန်သင်တန်းနှင့်ကင်းတပ်မက်စပ်လျဉ်း: abstinent ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဦးနှောက် mu-opioid receptors Imaging ။ Biol ။ Psychiatry57, 1573-1582 (2005) ။
192 ။ Ghitza, UE et al ။ binding ဦးနှောက် mu-opioid အဲဒီ receptor ကိုကင်း-အလွဲသုံးစားလုပ်ပြင်ပလူနာအတွက်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Biol ။ Psychiatry68, 697-703 (2010) ။
193 ။ ဝီလျံ, TM အလိုအလျောက် et al ။ အရက်မှီခိုနှင့်ဆက်ဆံရေးမှတဏှာစောစော abstinence အတွက် binding ဦးနှောက် opioid အဲဒီ receptor: တစ်ဦး [11C] diprenorphine ပေလေ့လာမှု။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol.19, 740-748 (2009) ။
194 ။ Kling, MA et al ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်ရေရှည်အတွက် [18F] cyclofoxy, methadone-ကုသဟောင်းတဦးဘိန်းဖြူစွဲနှင့်အတူ Opioid အဲဒီ receptor ပုံရိပ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther.295, 1070-1076 (2000) ။
195 ။ Sekine, Y. et al ။ abstinent စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက် Transporter သိပ်သည်းဆနှင့်ကျူးကျော် serotonin ဦးနှောက်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry63, 90-100 (2006) ။
196 ။ McCann, UD et al ။ abstinent (±) 3,4-methylenedioxymethamphetamine ( "ecstasy") အတွက်ဦးနှောက် dopamine နှင့် serotonin ပို့ဆောင်ရေး Positron ထုတ်လွှတ် tomographic လေ့လာမှုများသည်အသုံးပြုသူများ: သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှဆက်ဆံရေးမျိုး။ Psychopharmacology200, 439-450 (2008) ။
197 ။ Szabo, Z. et al ။ အရက်တစ်သမိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် serotonin ပို့ဆောင်ရေး Positron ထုတ်လွှတ် tomography ပုံရိပ်။ Biol ။ Psychiatry55, 766-771 (2004) ။
198 ။ Kalivas, PW စွဲ၏အချိုမှု homeostasis ယူဆချက်။ သဘာဝတရားဗျာ Neurosci.10, 561-572 (2009) ။
အာရုံကြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုပတ် ၀ န်းကျင်များတွင် cannabinoid နှင့် dopamine receptor စနစ်များ၏အခန်းကဏ္: ။ schizophrenia နှင့်စွဲလမ်းမှုတို့အတွက်သက်ရောက်မှုများ။ ဆဲလ်။ mol ။ ဘဝ Sci.199, 63-1597 (1613) ။
အဆိုပါ endocannabinoid စနစ်၏ 200. Lopez-Moreno, JA, Gonzalez-Cuevas, G. အ, Moreno, G. အ & Navarro, အမ်: အ endocannabinoid စနစ်၏ဆေးဝါးဗေဒ: အခြား neurotransmitter စနစ်များနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြန်အလှန်နှင့်အမူအကျင့်စွဲတွင်၎င်းတို့၏ဂယက်ရိုက်။ စှဲလမျးသူ။ Biol.13, 160-187 (2008) ။
201 ။ Rao က, အိပ်ချ် et al ။ perfusion အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI အားဖြင့်ထင်ရှားသန္ဓေသားဘကိုကင်းထိတွေ့မှုအတွက်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပြောင်းလဲကျိန်းဝပ်နှောက်သွေးစီးဆင်းမှု။ Pediatrics120, e1245-e1254 (2007) ။
ecstasy နှင့်ဆေးခြောက်အသုံးပြုသူများအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုအခြေခံတိုးမြှင့် activation ၏ 202. Roberts သည်, GM က & Garavan, အိပ်ချ်အထောက်အထား။ Neuroimage52, 429-435 (2010) ။
203 ။ Tapert, SF et al ။ abstinent ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက် inhibitory အပြောင်းအလဲနဲ့၏ functional MRI ။ Psychopharmacology194, 173-183 (2007) ။
၂၀.၄ Heitzeg, MM, Nigg, JT, Yau, WY, Zucker, RA & Zubieta, JK Striatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်ကြိုတင်ရှိနေပြီးအန္တရာယ်နှင့် medial prefrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်အရက်သမားကလေးများအတွက်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဇီဝကမ္မ။ Psychiatry204, 68-287 (295) ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းတွင် Heitzeg၊ MM, Nigg, JT, Yau, WY, Zubieta, JK & Zucker, RA ထိရောက်သောတိုက်နယ်နှင့်အရက်သောက်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ် - အရက်မိဘများအားနည်းနေသောဒဏ်ခံနိုင်သောကလေးများအကြားရှေ့ပြေးပုံစံတုံ့ပြန်မှုများကွာခြားမှု။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ Res.205, 32-414 (426) ။
206 ။ Volkow, ND et al ။ အရက်မိသားစုများ၏ထိခိုက်အင်္ဂါများ၌ dopamine D2 receptors ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်း: တတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်အချက်များ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry63, 999-1008 (2006) ။
207 ။ Sowell, ER et al ။ မိုးသည်းထန်စွာကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အရက်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူမမှန် cortical အထူနှင့်ဦးနှောက်-အပြုအမူဆက်စပ်မှုပုံစံများ။ Cereb ။ Cortex18, 136-144 (2008) ။
ဆေးကြောမှုများကို ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုအပေါ် CNR208 နှင့် FAAH မျိုးဗီဇများ၏ Filbey, FM, Schacht, JP, Myers, US, Chavez, RS & Hutchison, KE ။ တစ် ဦး ချင်းနှင့်ထပ်တိုးသက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychopharmacology1, 35-967 (975) ။
အစားအစာအပေါ်အေအကျိုးပေး circuit ကိုတုံ့ပြန်မှု 209. Stice, အီး, Yokum, အက်စ်, Bohon, C တို့, မာတီ, N. & Smolen, အနာဂတ်ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်၌တိုးမြှင့်ခန့်မှန်း: DRD2 နှင့် DRD4 ၏အလယ်အလတ်သက်ရောက်မှု။ Neuroimage50, 1618-1625 (2010) ။
210 ။ Lotfipour, အက်စ် et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Orbitofrontal cortex နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု: မိခင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် BDNF genotype မှကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry66, 1244-1252 (2009) ။
211 ။ ဟေးလ်, SY et al ။ multiplexing အရက်မှီခိုမိသားစုများအနေဖြင့်အမျိုးအနွယ်ကိုအတွက် orbitofrontal cortex အကြာတွင်၏နှောင့်အယှက်။ Biol ။ Psychiatry65, 129-136 (2009) ။
212 ။ Alia-Klein, N. et al ။ မျိုးဗီဇကိုကင်းစွဲအတွက် orbitofrontal မီးခိုးရောင်ကိစ္စအပေါ်ရောဂါအပြန်အလှန် x ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatry68, 283-294 (2011) ။
213. Wager, TD, Lindquist, အမ် & Kaplan, အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging အချက်အလက်များ၏အယ်လ် Meta-analysis သည်: လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Neurosci.2, 150-158 (2007) ။
Meta-analysis ကိုအသုံးပြု။ neuroimaging အချက်အလက်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်တိကျတဲ့အကဲဖြတ် 214. Wager, TD, Lindquist, MA, Nichols, TE, Kober, အိပ်ချ် & ဗန် Snellenberg, JX ။ Neuroimage45, S210-S221 (2009) ။
၂၁၅။ Goldstein, RZ & Volkow, ND ခံတွင်း methylphenidate သည် cingulate လုပ်ဆောင်မှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကကျသောသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကိုကင်းစွဲလမ်းမှုအားလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology215, 36-366 (367) ။
216. Kringelbach, ML & Rolls, ET လူ့ orbitofrontal cortex ၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း neuroanatomy: neuroimaging နှင့် neuropsychology မှသက်သေအထောက်အထား။ Prog ။ Neurobiol.72, 341-372 (2004) ။
217 ။ တိုနီဘလဲ, RJ အဆိုပါ amygdala နှင့် ventromedial prefrontal cortex: psychopathy အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဖိ။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ Sci.363, 2557-2565 (2008) ။
218 ။ Ridderinkhof, KR et al ။ အရက်သောက် mediofrontal cortex အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားအယွင်းများ၏ထောက်လှမ်းချို့ယွင်း။ Science298, 2209-2211 (2002) ။
ပုံမှန်လူ့ cortex အတွက် prefrontal ဒေသများ၏ 219. Rajkowska, G. အ & Goldman-Rakic, PS Cytoarchitectonic ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်: II ကို။ နေရာ ၉ နှင့် ၄၆ နေရာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပြောင်းလဲခြင်းနှင့် Talairach Coordinate System နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း။ Cereb ။ Cortex9, 46-5 (323) ။
220 ။ Petrides, အမ် Lateral prefrontal cortex: architectonic နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းက။ ဖိ။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ Sci.360, 781-795 (2005) ။